ShweMinThar: July 2018
Posted by Alex Aung at 1:25 AM No comments:
Org>>> ကိုမိုး (နည်းပညာ)
လူဟာ အသက်တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဖတ်တဲ့စာ၊ ထိတွေ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လုပ်ဖူးတဲ့အမှား၊ ဒါတွေက များများလာတယ်။ ဒါကို အတွေ့အကြုံလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဒီအတွက် ကိစ္စတစ်ခုကို စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ပိုပြီး ရှုထောင့်စုံစုံကနေ စဉ်းစားတတ်လာတယ်။ “ကျယ်ပြန့်တဲ့အမြင်” တစ်ခု ရှိလာတယ်။
လူငယ်ဘ၀မှာတော့ အတွေ့အကြုံ၊ ပညာ အားနည်းသေးတော့ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ဘက်ကိုပဲ ကြည့်မိလိုက်တာ၊ ကိုယ်လိုချင်တာတစ်ခုကိုပဲ တောင်းဆိုမိလိုက်တာတွေ ရှိတတ်ကြတယ်။ ဒါက တကယ်တော့ ရှက်စရာလည်း မလိုဘူး။ ရှုံ့ချစရာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အသက်အရွယ်၊ အတွေ့အကြုံအရ ဒီလိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်မှာလည်း ဒီစာရေးသက် ၆ နှစ်ကျော်အတွင်း ပြောင်းလဲလာတာတွေ အများကြီးပဲ။ အရင်က စိတ်ဓါတ်တက်ကြွမှု (Motivation) ဆိုတာတွေ သိပ်ရေးဖြစ်၊ ပြောဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ အဲဒါက ကြာကြာမခံဘူး ဆိုတာ သဘောပေါက်လာတယ်။ စိတ်ပဲ တက်ကြွနေပြီး လူက ဘာအရည်အချင်းမှ မရှိရင် အလကားပဲ။ ဒါကြောင့် Motivation အစား Mindset တွေ ပြောင်းဖို့ဆိုတာကို ဇောင်းပေးပြောဖြစ်လာတယ်။
အရင်က ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းစီ ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ် ဆိုတာမျိုး ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါမှ အဲဒီတစ်ယောက်ချင်းစီကနေ စုပေါင်းသွားတဲ့အခါ တိုင်းပြည်လည်း ပြောင်းလဲသွားမယ်ပေါ့။ နောက်တော့ ခေါင်းဆောင်သူ အစိုးရမပါဘဲ ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းစီ ပြောင်းလဲလာဖို့ကိုပဲ ထိုင်စောင့်နေတာဟာ ဘယ်လိုမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးဆိုတာ မြင်လာတယ်။
ဒါကြောင့် အရင်နဲ့ ခု မတူတော့တာက ရှက်စရာ မဟုတ်ဘူး။ တူနေသေးတာကမှ ရှက်စရာလို့ မြင်မိတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်ကလည်း ဒီအမြင်မျိုး၊ အသက် ၂၈ နှစ်ကျတော့လည်း ဒီအမြင်မျိုးပဲဆိုရင်တော့ ၁၀ နှစ်စာ ဖြုန်းပစ်လိုက်သလိုပါပဲ။
ဟုတ်ပြီ၊ အသက်အရွယ်အလိုက် အတွေးအမြင်တွေ ကျယ်ပြန့်လာဖို့လိုတယ်။ ဒါဖြင့် စဉ်းစားစရာက အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ရော ဒီလိုမျိုး တွေးတတ်ခေါ်တတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား မေးကြည့်မိတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဖြစ်နိုင်လို့ပဲ အဲ့လိုလူငယ်တွေ အများကြီးတွေ့နေရတာပေါ့။ အဲဒီအတွက် ဘာတွေများ လိုအပ်မလဲ။
၁။ ဖွင့်ထားတဲ့စိတ် ရှိဖို့လိုတယ်။
တကယ်တော့ Learn လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ၃ ဆင့်ရှိပါတယ်။ Learn သင်ယူတယ်၊ Unlearn သင်ယူထားတာကို ဖျက်ပစ်တယ်၊ ပြီးမှ Relearn ပြန်လည်သင်ယူတယ်။ ဆိုလိုတာက ပညာရပ်တွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေသည် အသစ် အသစ်တွေ ဖြစ်နေတယ်၊ ပေါ်နေတယ်။ ကိုယ်တစ်ခု သိပြီးပြီဆိုတိုင်း အဲဒါကိုပဲ တစ်သက်လုံး စွဲကိုင်ထားလို့ မရဘူး။ ဥပမာ ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းစီသာ ပြောင်းလဲလိုက်ရင် တိုင်းပြည်တိုးတက်ပြီလို့ သင်ယူလိုက်တယ်။ နောက်တော့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်၊ အဲ့လို အစိုးရက မပါဘဲ ပြည်သူတွေကပဲ တစ်ယောက်ချင်းစီ ပြောင်းလဲရင်း တိုးတက်သွားတဲ့နိုင်ငံ ရှိလား၊ ခေါင်းဆောင်မှု ဆိုတာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ၊ ဒီလိုစဉ်းစားတာသည် Unlearn လုပ်တာ၊ ပြီးမှ ဒါဆို ခေါင်းဆောင်မှုဟာ သိပ်အရေးကြီးတာပဲ ဆိုပြီး Relearn ပြန်လုပ်တယ်။
ပြောချင်တာက တစ်ခုခုကို တရားသေမှတ်ယူလို့ မရတော့ဘူး။ တစ်ဖက်ပိတ် လုပ်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ အမြဲတမ်း ပြန်ဆင်ခြင်နေဖို့လိုတယ်။ Unlearn နဲ့ Relearn လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ဒီအတွက် ဖွင့်ထားတဲ့စိတ် ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ဘီလ်ဂိတ်စ်ပြောဖူးတဲ့ စကားလေး သိပ်ကောင်းပါတယ်။ Smartness is an ability to accept new facts. စမတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အချက်အလက်အသစ်တွေကို လက်ခံနိုင်စွမ်းကို ခေါ်တာဖြစ်ပါသတဲ့။ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ အဲ့လို စမတ်ကျဖို့ လိုပါတယ်။
၂။ အဝေဖန်ခံနိုင်ဖို့ လိုတယ်။
စိတ်ကိုဖွင့်ထားပြီးရင် နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ အဝေဖန်ခံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်တယ်။ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာက တကယ်တော့ နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှ ကြုံရတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အထက်လူကြီးက ဆူတာ၊ ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက အကြံပေးတာ၊ Customer က complain လုပ်တာ၊ ဒါတွေအကုန်လုံးသည် ဝေဖန်တာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဝေဖန်တိုင်း လက်ခံနေရမယ် မဟုတ်သလို ဝေဖန်တိုင်း ငြင်းဆန်နေ၊ ရန်ပြန်တွေ့နေလို့လည်း မရဘူး။
Feedback is the breakfast of the champions. ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ ဝေဖန်မှုတွေက ကိုယ့်ကို တိုးတက်စေတယ်။ တွန်းအားဖြစ်စေတယ်။ ကိုယ်မသိတဲ့ရှုထောင့်ကနေ မြင်မိသွားစေတယ်။ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို သတိထားမိစေတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်တစ်ခုခု လုပ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်း ချီးကျူးသံတွေက ကိုယ့်ကို ဆက်လုပ်ဖို့ ခွန်အားပေးလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် လှောင်ပြောင်သံတွေ၊ ဝေဖန်ပြစ်တင်သံတွေကပဲ ကိုယ့်ကို ပိုပြည့်စုံတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေမယ်ဆိုတာကို သိစေချင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ မှားဖူးမှသာ အတွေ့အကြုံ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ ပညာကိုရှာ၊ နည်းပညာကိုသုံးပြီး ရှေ့လူရဲ့ပခုံးပေါ်ကနေ နောက်လူက တက်ကြည့်တဲ့ခေတ် ဖြစ်နေပါပြီ။ သဘောက ကွန်ပျူတာ ဆိုတာ ဘာလဲ ပြန်တီထွင်နေစရာ မလိုတော့ဘူး။ လေယာဉ်ပျံကို စမ်းသပ်ပျံသန်းနေစရာ မလိုတော့ဘူး။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း စလုပ်တဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ မှားနိုင်တဲ့ အမှားတွေကို သိဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင်မှားဖူးစရာ မလိုဘူး။ မှားခဲ့ပြီးသားသူတွေဆီကနေ ဒါတွေကို လေ့လာလိုက်လို့ ရတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ ဟောပြောချက်တွေ၊ စာအုပ်တွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကတစ်ဆင့် လေ့လာလို့ရတယ်။ ကိုယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ အမှားကတစ်ဆင့် သင်ခန်းစာယူတာကို Lesson learnt လို့ခေါ်တယ်ဆို ဒီလိုကိုယ်မမှားဖူးဘဲ မှားဖူးသူဆီကတစ်ဆင့် ရတဲ့ သင်ခန်းစာကိုတော့ Lesson studied လို့ ဆရာတစ်ယောက်က သုံးဖူးတယ်။ အတွေ့အကြုံက အရေးကြီးတာမှန်ပေမယ့် တစ်ဖက်ကလည်း အဲဒီလို ကိုယ်တိုင်မမှားရဘဲ ရနိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ခပ်များများ စုစေချင်ပါတယ်။
၄။ ဆန့်ကျင်ဘက်ကနေ တွေးကြည့်ပါ။
အဲဒီအလေ့အကျင့်လေးလည်း လူငယ်တွေကို ရှိစေချင်တယ်။ ဒီဘိတ် (Debate) လုပ်သလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်တည်း လုပ်ရတာပေါ့။ Debate လုပ်တာတွေ နားထောင်လိုက်ရင် မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်အသီးသီးကို သိလိုက်ရတယ်။ ဒီတော့ ရှုထောင့်စုံစုံ စဉ်းစားနိုင်သွားတယ်။ တစ်ခုတည်း၊ တစ်မျိုးတည်း သိနေတယ်ဆိုတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဘာကိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစား အဲ့လိုဆန့်ကျင်ဘက်ကနေ အမြဲ တွေးကြည့်ပါ။ ဥပမာဆိုပါတော့၊ မုဒိမ်းမှုတွေ မဖြစ်အောင် မိန်းကလေးတွေ လျှပ်ပေါ်လော်လီမ၀တ်ကြဖို့ ဆုံးမကြတယ်။ ရုတ်တရက်ဆို ဟုတ်သလိုလိုပဲ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ လျှပ်ပေါ်လော်လီဝတ်တိုင်း အဓမ္မကျင့်ခံရသလား၊ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူတွေကရော အဲ့လိုလျှပ်ပေါ်လော်လီ ၀တ်ထားကြလို့လား။ ဒီလိုတွေးလိုက်ရင် ဒါဟာ အဖြေမှန်ဟုတ် မဟုတ် သိသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ကနေ တွေးကြည့်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ပါ။ အမြဲ Why ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို မေးပါ။ ငါ ဒီလိုထင်တယ်၊ ဟုတ်ပြီ ဘာကြောင့် ထင်တာလဲ၊ ဒီလိုရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား၊ ဒီလိုတွေးရင်၊ ဒီလိုမြင်ရင်ရော မရနိုင်ဘူးလား၊ အမြဲတွေးပါ။ အဲဒါက ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် တွေးခေါ်မှု (Critical thinking) ကို အားကောင်းစေမှာ ဖြစ်သလို၊ ရှုထောင့်စုံစုံကနေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မျှမျှတတ တွေးတတ်လာစေမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောခဲ့ပြီးသလိုပါပဲ။ လူဟာ အသက်အရွယ်၊ အတွေ့အကြုံနဲ့လိုက်ပြီး အမြင်တွေ၊ တွေးခေါ်ပုံတွေ ပြောင်းလဲလာတတ်ပါတယ်။ ဒါ ပုံမှန်ပါပဲ။ ရှက်စရာလည်း မလိုပါဘူး။ မပြောင်းလဲဘူးဆိုမှသာ ပြဿနာပါ။ ခုဆောင်းပါးကတော့ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အမြင်ကျယ်ဖို့၊ တွေးခေါ်မှုအားကောင်းဖို့ လုပ်သင့်တဲ့ အချက်တစ်ချို့ကို ဝေမျှလိုက်တာပါ။ တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
(၁၄.၇.၂၀၁၈ ထုတ် Voice Weekly ပါ ဆောင်းပါးကို အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ထားပါသည်)
Labels: Lifestyle, ကလေးသူငယ်, ပညာရေး၊
ကမ္ဘာ့ဘဏ်လို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေက ကောက်လို့ ရတဲ့ စာရင်းအင်း အချက်အလက်တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေး 6% 7% နဲ့ တိုးတက်တယ် လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ MMRD ကုမ္ပဏီက ၂၀၁၈အတွင်း ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေကို လေ့လာပြီးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်အတွင်း ဆက်တိုက်ကျနေတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဘယ်ဟာမှန်သလဲ။ ?
တိုင်းကြတဲ့ ပေတံ မတူလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ခုစလုံး မှန်နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက နိုင်ငံတခုရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်လား မတိုးတက်လားဆိုတာ macroeconomy တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေး အခြေအနေကို ပြောတာပါ။ အဲဒါ ကို တိုင်းတာရင် Real GDP ငွေကြေးဖောင်းပွမူ နုတ်ထားတဲ့ တမျိုးသားလုံး ထုတ်ကုန် ပေါ်မူတည်ပြီး တိုင်းတာပါ။
@MMRD ကုမ္ပဏီကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ တယောက်ချင်း microeconomy စီးပွားရေး ကောင်းတာ မကောင်းတာကို တိုင်းတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင် အများစု အနေနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေတော့ ပြုတ်သွားတော့မလို ခံစားရလောက်အောင် မကောင်းတာအမှန်ပါ။ ဒါ ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ တကယ်လို့ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေ တိုင်းတာတဲ့ နည်းတွေ တိုင်းတာတာတွေမှန်ခဲ့ရင် လက်ရှိအခြေအနေကို " ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ကျဆင်းနေပေမဲ့ FDI နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ လုပ်ငန်းများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဟာ တနှစ်ကို ၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်တိုးတက်နေပါတယ်။ '' လို့ ပြောရမှာပါ။ ဒီတော့ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်အများစုရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကျနေပြီး နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးတက်နေတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ မှားပြီး တွက်ချက်ကြတာ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ပြည်သူတွေကို လိုရာဆွဲပြီး လုပ်ကြံပြောတာလို့ ယူဆလိုက်ရင် အဲဒီ ပြုတ်ခါနီးဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင် နောက် နှစ်အနည်းငယ်တွင်းမှာ လုပ်ငန်းပြုတ်နေပါပြီ။ လုပ်သင့်တာ အမြန် မလုပ်ခဲ့ရင် လုပ်ငန်းရှင် မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
အခုနှစ်ပိုင်း ငါးနှစ်အတွင်း မြန်မာပြည်မှာ လာပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီ လေးငါးထောင် ( တချို့က သောင်းဂဏန်းလောက်အထိ ပြောကြပါတယ်။) လောက်ရှိနေပါပြီ။ တချို့လုပ်ငန်းက ဝန်ထမ်း ဆယ်ဂဏန်း တချို့က ငါးထောင် တသောင်း လောက်ရှိပါတယ်။ စာရင်းအသေအချာကောက်ထားတာ မရှိပေမဲ့ အကြမ်းအားဖြင့် လူ တသန်း နှစ်သန်းကြားလောက် အလုပ်ခန့်ထားတာပါ။ အရင်းအနှီး အများဆုံးမြုပ်နှံပြီး နိုင်ငံခြားထုတ်ကုန်တန်ဖိုး အများဆုံးက ရေနံဓာတ်ငွေ့ပါ။ လူသိအများဆုံးနဲ့ နိုင်ငံသားအများဆုံးသုံးဖြစ်တာက Telenol, Oredoo တို့လို telecommunication လုပ်ငန်းတွေပါ။ Coca Cola, KFC, Starbuck တို့လို အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတွေပါလာသလို CP, Hwawai, Grab, ZTE တို့လို ကမ္ဘာ့အဆင်မှီ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက ကုမ္ပဏီတွေလည်းပါလာပါတယ်။ အဲဒီ ကုမ္ပဏီတွေက အလုပ်အကိုင် သိပ်မဖန်တီးပေးနိုင်ပေမဲ့ ( ကုမ္ပဏီအကြီးတွေက အလုပ်ခေါ်ရင် လုပ်ခလစာ မြင့်မြင့်ပေးပြီးခေါ်တတ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းဆင်းတော်တော်များများဟာ စင်္ကာပူလစာကို မရှုံးလောက်အောင်ရကြပါတယ်။ ) GDP တမျိုးသားလုံး ထွက်ကုန်ပမာဏမှာ အချိုးအစားတော်တော်များများ ပါဝင်နေပြီး နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်နေတယ် ဆိုတဲ့ ပုံရိပ်ထွက်စေတာပါ။ အခု ၂၀၁၈ ခုနှစ် မြန်မာ့ သမိုင်းတလျောက်မှာ ကုန်သွယ်မူ export import ပမာဏ အမြင့်မားဆုံး ဖြစ်လောက်အောင် မြင့်တက်လာတာ FDI နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမူကြောင့်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။
မြန်မာစီးပွားရေးကို အင်ဂျင် အသစ်နဲ့ မောင်းနှင်နေတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါ။ ဒါတောင် ရခိုင် အရေးအခင်းကြောင့်နဲ့ အလုပ်သမားတွေ မကြာခဏ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ဆန္ဒပြကြလို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ အရှိန်ကျသွားလိုပါ။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ အများစုက အောက်ခြေအလုပ်သမားတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း သိပ်မဖန်တီးပေးတဲ့အတွက် ဓနခွဲဝေမူသေချာ မရှိသေးတဲ့အပြင် ကုမ္ပဏီအများစုဟာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလမှာဘဲရှိနေတဲ့အတွက် အခွန်ငွေလဲမရသေးပါ။ ယှဉ်ပြိုင်ခံရတဲ့ မြန်မာ လုပ်ငန်းရှင်တွေတော့ လုပ်ငန်းပြုတ်လုပြုတ်ခင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါ့အပြင် GDP နဲ့ အခွန်ငွေ အချိုးအစားမှာ အခွန်ရငွေနဲတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံရပြီး ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေက အခွန်တိုးဆောင်ဖို့ တောင်းဆိုခံနေရတာပါ။ ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်တာရှိသလို ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေ အပြိုင်ခေါ်ကြရတာပါ။
မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေ ကျရှုံးရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းများ
၁။ နည်းပညာ နိမ့်ကျခြင်း
မြန်မာလုပ်ငန်းရှင် အများစု လုပ်ကြတာက စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း အများစုဖြစ်ပြီး နည်းပညာအဆင့်နိမ့်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ပလတ်စတစ် ထုတ်ကုန်တွေထုတ်သလို ထုတ်ကုန်အဆင့် သိပ်မများတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဘဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခု AFTA ဖြစ်သွားတော့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက သွင်းလာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုမှ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တာ မရှိပါဘူး။ ပြည်တွင်း စက်ရုံ အများစုက စက်အဟောင်းတွေ အများကြီးစုမိ
သွားပြီး သံတိုသံစအနေနဲ့ ရောင်းစားရမဲ့ အဆင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဥပမာ ဆီစက်ဆိုပါတော့ အကုန်နီးပါးရပ်နေပါပြီ။ ရေခဲစက်ဆို ပြုတ်တာကြာပါပြီ။ မြန်မာပြည်ထုတ် ၈၁/၄" နှစ်လုံးထိုး ကွန်ပလပ်စာ ဆိုတာ နာမည်ကြီးပါ။
ဂျပန်တယောက်ကို ပြပြီ့း ဒါကို မြန်မာပြည်က ထုတ်တာလို့ ပြောတော့ အရမ်း အံ့သြသွားပါတယ်။ ရုတ်တရက် အထင်ကြီးပြီး အံ့သြတာလို့ ထင်ခဲ့ပေမဲ့ သူက အဲလို efficient မဖြစ်တဲ့ compressor ကို တကမ္ဘာလုံး မသုံးတာကြာပြီ။ စွမ်းရည်ပိုကောင်းတဲ့ ၃" ၆ လုံးထိုး compressor တွေဘဲသုံးတော့တယ် လို့ ပြောလိုက်တော့မှ ကိုယ့်ကို သနားပြီး အံ့သြသွားမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။ တခြားလုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာလဲဒီတိုင်းပါဘဲ။
၂။ အကြံအဖန် လုပ်ကြလို့ပါ။
ဓာတ်ပုံမှာပါတဲ့ အုတ်က မြန်မာလုပ်ငန်းရှင် ဖုတ်ထားတဲ့အုတ်နဲ့ FDI ကြောင့် အခုတလော တနိုင်တပိုင်လာဖုတ်တဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ လေပေါင်အုတ်လို့ ခေါ်တဲ့အုတ်တို့ပါ။ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်ဖုတ်တဲ့အုတ်က အခုရက်ပိုင်း မိုးသုံးလေးရက်ရွှာတော့ အရည်ပျော်သွားပါတယ်။ FDI အုတ်ကတော့ နဂိုအကောင်းအတိုင်းကျန်နေပါတယ်။ မြန်မာအုတ်ကို အုတ်ပုံစံရိုက်တော့ မြေနီဆိုးပြီး ထင်းနဲ့ဖုတ်ပါတယ် ထင်းအကုန်သက်သာအောင် အကာလောက်ကျက်တာနဲ့ မီးထိုးတာရပ်လိုက်ပါတယ်။ လာပို့ရင် အုတ်ပွဲစားက တဆင့်လာပို့ပြီး အလုံးရေခိုးပါတယ်။ FDI တွေက ဒါကို ချက်ချင်း သတိထားမိသွားပါတယ်။ သူတို့က မြေစေးလုပ်ပြီး ကျော်မီးသွေးမှုန့်ဝယ်ပြီး ရောလိုက်ပါတယ်။ လျပ်စစ်နဲ့ ဖုတ်ပြီး အရည်အသွေးက နိုင်ငံတကာက အုတ်တွေလို ကောင်းလာပါတယ်။ ဈေးအများကြီးပိုမကြီးတဲ့အပြင် လာပို့ရင် အရေအတွက် အပြည့်အပြင် အပို ၄ ၅ ၁၀ လုံးပါလာတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ FDI တွေ ဝင်လာတော့ ချက်ချင်းအောင်မြင်သွားပြီး မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေ ချက်ချင်းကျရှုံးသွားတဲ့ အကြောင်းရင်းတခုပါ။
၃။ အမျှော်အမြင် မရှိလို့ပါ။
ရေတို အကျိုးအမြတ်ကိုဘဲကြည့်ပြီး လုပ်ကြပါတယ်။ '' မျက်တောင်တဆုံးဘဲကြည့်ကြပါတယ်။ မျက်စိတဆုံး မကြည့်ကြပါဘူး။ '' နိုင်ငံတကာမှာ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မူကို comsumer ဘယ်လောက်များများရဲ့ အကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်ကောင်းမလဲ ဆိုတာကို တိုင်းတာပေမဲ့ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေက ရေတိုအမြတ်ဘဲကြည့်တာပါ။ အခု နိုင်ငံခြားထွက်လည်ကြ ရှော့ပင်းထွက်ကြ ဆေးထွက်ကုကြ ကျောင်းသွားတက်ကြပေမဲ့ စက်ရုံလေ့လာရေး လုပ်ငန်းလေ့လာရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ့ဆုံပွဲ business matching တွေ စီးပွားရေး seminar တွေ သွားတက်ကြတဲ့သူ အတော်နည်းပါသေးတယ်။ နိုင်ငံခြားထွက်တာ အရသာခံပြီး ကြွားဖို့လောက်ဘဲ ဖြစ်နေတာပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ယူလေ့လာနေရမယ်ဆိုတာ သတိမထားမိကြပါဘူး။
ဒါနဲ့ မြန်မာပြည်ကနေ နိုင်ငံခြားသွားလည်ကြတဲ့ မြန်မာပြည်ကလူတွေက ပြည်တွင်းမှာ ဘာစီးပွားရေးလုပ်ပြီး အောင်မြင်နိုင်မလဲ ဆိုတာ သတိမထားမိကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေက မြန်မာပြည်မှာ ဘာစီးပွားရေးလုပ်ပြီးအောင်မြင်နိုင်မလဲ ဆိုတာ ချက်ချင်း သတိထားမိကြပြီး မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေထက် အရေအသွေးပိုကောင်းအောင် လုပ်လိုက်ကြတာပါ။ ဒါအပြင် မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေက ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်အောင် လေ့လာဖို့ လိုတာလဲသတိမပြုမိကြပါဘူး။ အထူးသဖြင် စီးပွာရေးလုပ်ပြီးအောင်မြင်ဖို့ တရုတ်ဘာသာ စကား တတ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ သိပ်သတိမထားမိသေးလို့ပါ။ ( အင်္ဂလိပ်စာက နည်းပညာ သင်ကြားတတ်မြောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ )
၄။ အလုပ်သမားတွေ မကောင်းလို့ပါ။
ပညာတတ် မြန်မာလူငယ်လေးတွေကိုတော့ မြန်မာပြည်ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ FDI တွေက လစာကောင်းကောင်းပေးပြီး ခေါ်သွားလို့ ကုန်နေပါပြီ။ ပညာတတ်ဖြစ်ရင် အတွေ့အကြုံ သိပ်မရှိသေးတဲ့လူတွေဘဲ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေ ခေါ်နိုင်တော့တာပါ။ အသစ်ခေါ်သင်ပေးလိုက် လူရည်လည်သွားရင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ ရောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတာပါ။ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေခေါ်လို့ရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ခိုကြတာ ခိုးကြတာ ထုံးစံလိုဖြစ်နေပါပြီ။ လူယုံ အလုပ်သမားရှိမှ အောင်မြင်နိုင်တဲ့ ခေတ်ရောက်နေပါပြီ။
၅။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိကြတာပါ။
ပြည်တွင်းက လုပ်ငန်းရှင်းအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အားနည်းတဲ့အပြင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်း အားနည်းတတ်ပါတယ်။ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင် အများစု စဉ်းစားကြတာက နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ ဝါးမျိုသွားမှာ စိုးရိမ်ကြတာပါ။ ထူးထူးခြားခြား တွေးနည်းနဲ့ ကန့်ကွက်တာလဲရှိပါတယ်။ မြန်မာ့ ဂီတပညာရှင်နဲ့ နိုင်ငံခြားဂီတပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တော့ မြန်မာ့ တူရိယာနဲ့ နိုင်ငံခြားတူရိယာတွေ ပေါင်းစပ် တီးခတ်တာမျိုးကို မြန်မာ့ ဂီတ ပျောက်ကွယ်သွားမှာ စိုးလို့ ဆိုပြီး ကန့်ကွက်တာမျိုးပါ။ မြန်မာ့ တူရိယာတွေက နိုင်ငံတကာကို ပြန့်နှံသွားပြီး ကမ္ဘာကို လွမ်းမိုးသွားနိုင်တာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာမျိုး မတွေးကြပါဘူး။ နမူနာ ပြောရရင် ထိုင်းအစားအစာက နိုင်ငံတကာကလူတွေစားလို့ အဆင်ပြေအောင် နိုင်ငံတကာအစားအစာတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ကပြားဟင်းလုပ်ထားတာပါ။ အခု တကမ္ဘာလုံး ပြန့်နှံနေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာကလူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး လိုသလို ညှိနှိုင်းမူ မရှိရင် မြန်မာ့ တူရိယာဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမူဘဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ့စီးပွားဘဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာလူမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် တွင်ကျယ်နိုင်တဲ့ ဂွင် တဖြေးဖြေးကျဉ်းမြောင်းလာပြီး ကြာရင် ပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။
၆။ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကြံဖန်ငြင်းခုန်နေလို့ပါ။
မြန်မာတွေ တဦးချင်း တော်ကြပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးက လူတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေးငါးဦးလောက် ပေါင်းပြီး တခုခု လုပ်ရင်တော့ တကမ္ဘာလုံးကလူတွေရဲ့ နောက်ဆုံးနီးပါးကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် ရှာကြံအပြစ်ပြော ဆရာလုပ်နေကြလို့ပါ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပါဘဲ။ ပိုက်ဆံသာ ချမ်းသာတာပါ။ စိတ်ဓာတ်ဆင်းရဲတတ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ဖက်စပ် joint venture လုပ်ပြီး အခုထိ ခံနေသေးတဲ့ လုပ်ငန်းဆို အတော်ရှားနေပါပြီ။
၇။ လျှပ်စစ်မီး မရလိုပါ။
ဒါတော့ အမှန်ပါ။ လိုသလောက် မရတဲ့အပြင် မကြာမကြာမီးပြတ်တတ်ပါတယ်။ လာတဲ့ လျပ်စစ်မီးကလဲ မီးအား voltage ကျတတ်ပါတယ်။ တချို့နေရာမှာ စက်တွေလည်ဖို့ မရလောက်အောင် ကျတတ်ပါတယ်။
အဲဒါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲက တူညီတဲ့ ဝန်အားကို လုပ်နိုင်အောင် မီးပိုစားတယ်။ Ampere တက်ပါတယ်။ အဲဒါ သွယ်ထားတဲ့ မီးကြိုးတွေ လျပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ လောင်တတ်ပါတယ်။ မီးအားမြင့်စက်သုံးတော့ ကုန်ကျစရိတ်ပိုကုန်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ နိုင်ငံခြားက ထုတ်ကုန်တွေကို ပြိုင်ထုတ်ဖို့ လျပ်စစ်များများသုံးမဲ့ လုပ်ငန်းတွေ မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။
၈။ လုပ်ငန်းလုပ်လို့ ခက်အောင် အစိုးရရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ခက်လို့ပါ။ မူဝါဒ မကြာခဏပြောင်းတတ်လို့ပါ။
အခုတော့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အတော် ဖြေလျော့ပေးပြီးနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ထပ်လျော့ဖို့ လိုတဲ့အပြင် လျှော့လွန်းလို့ စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့ လုပ်တာမျိုးတွေ ဥပဒေဘောင် အပြင်က လုပ်တာတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုလာပါတော့မယ်။ ဝန်ကြီးဌာနတွေက မူဝါဒ ပြောင်းတတ်တာ အပြင် အလုပ်အပ်ပြီးတဲ့ အထိတောင် သဘောတူ စာချုပ်ကို တောင် အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ချုပ်ခိုင်းတာမျိုးတောင်ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးက အရင် အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ အခု NLD အစိုးရက အရမ်း အားနည်း weak ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့်ပါ။ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ သေချာပြန်စဉ်းစားရင် လက်ရှိအစိုးရကို ဘယ်လိုမှ အပြစ်မတင်ရက်လောက်အောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အစိုးရတက်လာတဲ့ ရွှေးကောက်ပွဲလောက်ကဘဲ စပြောကြည့်ရင် ၁၉၉၀ ရွှေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပေမဲ့ အာဏာတကယ်မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခု တခါရော အာဏာလွဲပြောင်းပေးမလား မသေချာခဲ့ပါဘူး။ ဒါအပြင် အာဏာရခဲ့ပြီး ၁၉၆၂ ကလို အာဏာပြန်သိမ်းမလားဆိုပြီး သံသယကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းကိုနိုင်တို့လို အမာခံတွေက ရွှေးကောက်ပွဲမဝင်ခဲ့ဘဲ ဝန်းရံရုံ ဝန်းရံခဲ့တာပါ။
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက အတော်ဆုံးလူတွေ အများစုက အစိုးရဆီမှာဘဲ တစုတစည်းထဲရှိနေတာပါ။ နှစ် ငါးဆယ် အတွင်း နိုင်ငံခြားထွက် ပညာသင်ခွင့်ကို ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေဘဲရကြပြီး သင်လာတဲ့ပညာကို အသုံးချခွင့် အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဘဲရကြလို့ပါ။
၉။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးဖို့ rule of law လိုပါတယ်။
အခု မြန်မာနိုင်ငံကနေ နိုင်ငံခြားထွက်လည်တဲ့သူ တနှစ်ကို သုံးသန်းလောက်ရှိပါတယ်။ ထိုင်း တနိုင်ငံထဲကို သုံးသိန်းကျော် သွားလည်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ လေးငါးသန်းလောက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း တခြားနိုင်ငံရောက်သွားရင် အခွန်ဆောင်ဖို့ လိုရင် ဆောင်ပါတယ်။ စည်းကမ်းတွေလဲလိုက်နာကြပါတယ်။ အမှိုက်လည်း စနစ်တကျပစ်ပါတယ်။ ကွမ်းတံထွေးတွေလည်း လျောက်မထွေးကြပါဘူး။ အလုပ်ချိန်လည်း မနောက်ကျပါဘူး။ ခိုကပ်ပြီးလည်း မလုပ်ကြပါဘူး။ တယောက်နဲ့တယောက်လည်း ကူညီတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့ အခွန်လည်း မဆောင်ပါဘူး။ စည်းကမ်းလည်း မလိုက်နာတော့ပါဘူး။ အမှိုက်လည်း စနစ်တကျ မပစ်တော့ပါဘူး။ ကွမ်းတံထွေးလည်း ထွေးချင်ရာထွေးပါတယ်။ အလုပ်ချိန်လည်း အမြဲနောက်ကျပါတယ်။ အလုပ်မှာလည်း ခိုကပ်တတ်ကြပါတယ်။
လူကတော့ ဒီလူတွေပါဘဲ။ နိုင်ငံခြားမှာတော့ ဥပဒေချိုးဖောက်ရင် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပါတယ်။ ဒီတော့ စည်းကမ်း ဥပဒေလိုက်နာကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်တော့ ဥပဒေချိုးဖောက်တာမျိုးကို မသိကျိုးနွံပြုထားတယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမူ မရှိဘူးဆိုပါတော့။ ဒါနဲ့ လူတွေလဲ နေချင်သလို နေလာကြတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ စီးပွားရေး အဆင်ပြေအောင် အစိုးရက စီစဉ်ပေးရမယ်။ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ် လို့ ပြောလာတယ်။ နိုင်ငံအတွက် တာဝန်မဲ့လွန်းပါတယ်။ ကြားဘူးတာက ဂျပန်ခေတ်တုန်းက ခိုးတာ ဝှက်တာ လိမ်တာ မရှိကြဘူးလို့ လူကြီးတွေ ပြောကြတာပါ။ ခိုးတဲ့ဝှက်တဲ့ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်တဲ့သူတွေကို လက်သဲခွံခွာတာမျိုး လုပ်ခဲ့လို့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကို စင်္ကာပူလို ကြီးပွားတိုးတက်တာမျိုး ဖြစ်စေချင်ရင် ဥပဒေ စည်းကမ်းထိန်းတာမျိုး တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ကလေးကို မူဒိန်းကျင့် ပြီးတော့ သတ်တာမျိုးကို စင်္ကာပူကလို ကြိမ်ဒဏ်မျိုးပေးပြီး စင်္ကာပူက ကြိမ်ဒဏ်ပေးတဲ့သူတွေဖိတ်ပြီး ဘယ်လို ရိုက်လဲဆိုတာ ဗီဒီယို ရိုက်ပြီး တနိုင်ငံလုံးပြသင့်တာပါ။ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လုပ်တာ လွန်နေပါပြီ။
အဲဒီလို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့နေလာသူတွေကို အလုပ်ခန့်ရပြီး အပြစ်တခုခု ကျူးလွန်လို့ အလုပ်ထုတ်ရင် အလုပ်ထုတ်ခဲ့ရင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေက ကာကွယ်တတ်ပါတယ်။ အစိုးရကလည်း အောက်ခြေ ဆင်းရဲသားတွေကို လူလူချင်းစာနာထောက်ထားရမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဥပမာ ဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည် ရှင်းလင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေပါစိုးလို့ ဆိုပြီး အရေးမယူတော့ပြန်ပါဘူး။ အောက်ခြေ ဝန်ထမ်းတွေက အစိုးရညွှန်ကြားတာကို မသိကျိုးနွံပြီုး အရေးမယူတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် အခု ကျူးကျော် အသစ် လက်မခံဘူး တစ်တဲကျူး တစ်တဲရှင်းမယ် ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စည်ပင် အုပ်ချုပ်ရေးမူးရုံးအပြင် မြို့နယ် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တို့ကို အဆင့်ဆင့် အကြောင်းကြားပေမဲ့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးတာမျိုးဟာ အခုထိ အားနည်းတုန်းပါ။ ဒါနဲ့ အဲဒီလို အခြေအနေတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်အများစု လုပ်ငန်းပြုတ်ကြတာပါ။
၉။ အရင်းအနှီး ရဖို့ခက်တာပါ။
လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံက လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ လိုတဲ့ အချက်အများကြီးထဲက တခုပါ။ ရဖို့ခက်တာလဲအမှန်ပါ။ လူတိုင်း ငွေအရင်းအနှီးရှာဖို့ အချိန်ကုန် အလုပ်မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဖာသာ ကိုယ်မေးသင့်တာက
က။ ပိုက်ဆံရှိရင် တကယ်အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်မလား ဆိုတာပါ။ ဒါ့အပြင်
ခ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံး လိုအပ်တဲ့အရင်းအနှီးတွေရနေရင် ပြိုင်ဆိုင်မူများပြီး အမြတ်ရဖို့ ထင်ထားသလို လွယ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိထားသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားက FDI တွေက လုပ်ငန်းတိုင်း ချေးငွေရတာချင်းတူတဲ့ သူတို့နိုင်ငံမှာ ပြိုင်လုပ်ဖို့ခက်လို့ အရင်းအနှီးရဖို့ခက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို စွန့်စားပြီး လာလုပ်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့်
ဂ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေက အမြတ်တကယ်လိုချင်ရင် ချေးငွေရဖို့ ခက်တာကို ကုန်းအော်နေဖို့ထက် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ငွေပမာဏနဲ့ ကိုက်တဲ့ ဘာလုပ်ငန်းကို ဘယ်နယ်ပယ် ဘယ်နယ်မှာ ရှာလုပ်ရမလဲဆိုတာပါ။ ပိုက်ဆံရမဲ့ လုပ်ငန်း အရင်လုပ်ပါ။ ရလာတော့မှ ကိုယ် လုပ်ချင်တာလုပ်ပါ။
ပြည်တွင်းက အတိုးများများပေးရတာ တူတဲ့လူချင်းပြိုင်ရင် ကိစ္စမရှိပေမဲ့ အခုလို အတိုးနည်းတဲ့ နိုင်ငံခြားသား လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ပြိုင်ရတာ မလွယ်ပါဘူး။
၁၁။ အစိုးရက တနိုင်ငံလုံးကို ခြုံငုံပြီး မရှုမြင်နိုင်တာ vision မရှိပါဘူး။
လက်ရှိအစိုးရက တိုင်းပြည်ချစ်တာသေချာပါတယ်။ နိုင်ငံအတွက် အသက်ပေးပြီး စတေးခံမယ်ဆိုတာလဲ သေချာပါတယ်။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ပြည်သူတွေ ထောက်ခံမူ အများဆုံးရတဲ့ အစိုးရဆိုတာလည်း အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရမှာ နိုင်ငံတခုကို ဦးဆောင်မူ အရည်အချင်းမှာ လိုနေပါတယ်။ အရမ်းအားနည်းနေတာက ပြသာနာတခုကို တနိုင်ငံလုံး အခြေအနေနဲ့ မဆက်စပ်နိုင်တာပါ။ ဥပမာ နွေရာသီမီးပျက်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးမြေတွေ ရေမရပါဘူး။ မိုးရာသီကျရင် တနိုင်ငံလုံး ရေကြီးပါတယ်။ ရွာတဲ့မိုးရေတွေကို ပင်လယ်ထဲ ဒီအတိုင်းပေး စီးဆင်းစေလိုက်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်မီး မရလို့ နယ်အသီးသီးက တိုင်းရင်းသားတွေ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်ထွက်လုပ်လို့ လူငယ်တွေကုန်သလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ လျပ်စစ် မရှိလို့ အပင်တွေခုတ်ပြီး မီးစိုက်လို့ သစ်တောတွေလဲ အတော်ပြုန်းတီးနေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေက ဒေသဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရက ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီအချက်တွေက နိုင်ငံမှာ အကြီးစား ဆည်တွေတည်ပြီး လျပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်ပြီး စိုက်ပျိုးမြေတွေကို ဆည်ရေပေးရင် ပြသာနာ အကုန်ပြေလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆည်ဆောက်ရင် ဒေသခံတွေ ရွှေ့ပြောင်းပေးရမယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မယ် ဆိုပြီးကန့်ကွက်တာ အစိုးရက ပြည်သူတွေ ဆန္ဒကို လက်ခံပြီး ဆည်ဆောက်တဲ့ စီမံကိန်းတွေကို ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ အစိုးရဟာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာနဲ့ တနိုင်ငံလုံးရဲ့ အခြေအနေကို မဆက်စပ်နိုင်တာ ပြတာပါ။ ပြည်သူတွေက သူတို့ ဒေသ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး တောင်းဆိုတာပါ။ ဒါအပြင် ပြည်သူအများစုရဲ့ ပျဉ်းမျှ ပညာအရည်အချင်း အသိဥာဏ်စတာတို့ဟာ နိမ့်ကျနေတာ သတိမထားမိပါဘူး။ တကယ်လုပ်သင့်တာက ပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံပေးချက်ကို နားထောင်ပြီး ဆည်ဆောက် လျပ်စစ်နဲ့ စိုက်ပျိုးမြေရရင် အလုပ်လဲရမယ်။ မီးဆိုက်ဖို့ အပင်လဲမခုတ်ရဘူး။ လ့ျပ်စစ်ရောင်းပြီး ပိုက်ဆံရရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်လာနိုင်မယ် ဆိုတာ ရှင်းပြသင့်တာပါ။ ပိုက်ဆံရလို့ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြကြတဲ့ NGOs တို့ အဖွဲ့အစည်းတို့ကို ကန်ထုတ်ပြစ်သင့်တာပါ။
၁၂။ ဘုရင်မှားရင် ပုဏ္ဏားကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဘုရင် အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ချင်တဲ့ ပုဏ္ဏားတွေက များနေတတ်တော့ တယောက်နဲ့တယောက် အပြစ်ရှာတိုက်ခိုက်တာမျိုးရှိတတ်သလို အကြံပေးအတိုင်ပင်ခံတွေဆိုတာ တခါတလေမှာ အတိုင်ပင်ခံ consultant လုပ်တဲ့နေရာမှာသာ ဆရာတဆူဖြစ်တာပါ။ လုပ်ငန်းကို အလုပ်ဖြစ်အောင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သူများ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာပါ။ အတိုင်ပင်ခံတွေရဲ့ ပြသာနာတခုက ဘုရင်တွေ အလိုရှိတဲ့ အခါမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင် အနားမှာ အမြဲနေပေးရတတ်ပါတယ်။ အဲဒါ တကယ် အောက်ခြေက အခြေအနေနဲ့ ကင်းကွာသွားပြီး အဲဒီ အကြံပေးတွေ ပြောတဲ့ မူဝါဒတွေဟာ တကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတွေအတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
၁၃။ တကယ်လုပ်နိုင်ပြီး နားလည်တဲ့သူတွေက အစိုရကို ဝိုင်းမကူဘဲ ဘေးထွက်ထိုင်နေကြလို့ပါ။
လုပ်ငန်းကို သေချာနားလည်ပြီး အစိုးရကို သေချာ အကြံပေးနိုင်သူတွေကတော့ အတိုင်ပင်ခံများဖြစ်ချင်သူကြားထဲမှာ တိုက်ခိုက်မနေတော့ဘဲ မိမိဘာသာ ဘေးထိုင်ထွက်ပြီး ကြိတ်စားနေကြပါတယ်။
၁၄။ ကြီးသွားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကြောင့် ပြိုင်ပြီး မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်ထဲက တချို့က နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပူးပေါင်းမိသွားပြီး အရမ်းကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းအသစ်တွေ ထူထောင်မိသွားကြပါတယ်။ တနှစ်ကို ဒေါ်လာ သန်း ရာဂဏန်းလောက်အထိ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအထိ တည်ထောင်သွားနိုင်ကြတာပါ။ ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံက အကြီးဆုံး လက်လီအရောင်းဆိုင်။ ဓာတ်မြေသြဇာ။ ဘိလပ်မြေ။ လောင်စာဆီ။ တိရစ္ဆာန်စာ တင်သွင်းခြင်း။ ထုတ်လုပ်ရောင်းချ စသည်။
က။ FDI နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ လုပ်ငန်းတွေ ကြီးထွားလာတာနဲ့
ခ။ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းအချို့ အရမ်းကြီးထွားတာတွေဟာ တခြား လုပ်ငန်းအငယ်တွေကို ရပ်တည်ဖို့ ခက်လာစေပါတယ်။ အစိုးရက စီးပွားရေး လှုံ့ဆော်မူ သေချာ မလုပ်ပေးနိုင်ရင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်က ပြောင်းလဲ မလုပ်နိုင်ရင် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပြုတ်သွားမဲ့ လုပ်ငန်းအများအပြားရှိနေပါတယ်။ ( သိသာတဲ့ အပြောင်းအလဲတခုက လုပ်ငန်းရှင် အငယ်တွေရဲ့ သားသမီးတွေဟာ လုပ်ငန်းငယ် အသစ်တွေထပ် မတည်ထောင်နိုင်တော့ဘဲ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာ လခစား အဖြစ် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေကြပါပြီ။ )
၁၅။ FDI တွေ ကိုယ်တိုင် လုပ်ငန်းကျလာပါတယ်။
အဓိက အချက်တွေ အများကြီးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက သူတို့ မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာလို့ပါ။ အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေက စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားလာတယ်။ အကြံအဖန်မျိုးစုံလုပ်လာတယ်။ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တတ်လာတယ်။ အလယ်အလတ်ဝန်ထမ်းတွေက အလုပ်မှာ မမြဲကြပါဘူး။ အစိုးရက လုပ်ငန်းတွေ ရပ်တည်နိုင်အောင် အကာအကွယ် မပေးနိုင်ပါဘူး။ ကြားက ခွင်ရိုက် အကြံအဖန်လုပ်ပြီး သပိတ်မှောက် ဆနပြတာမျိုးကို သေချာ မရှင်းပေးနိုင်ပါဘူး။ ဥပဒေ အပြောင်းအလဲ မြန်တာ ဥပဒေ မထိန်းသိမ်းပေးတာအထိပါပါတယ်။ နောက်ဆုံး ရခိုင်ပြသာနာဖြစ်တော့ အမေရီကန် ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မျိုး ဖြစ်မှာစိုးပြီး လာဖို့ ရပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာ စက်ရုံပိတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာ အလေးသာသွားပါတယ်။ MIC ခွင့်ပြုချက် ကျပြီး လုပ်ငန်းတွေ တန့်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်တာတွေလဲ မနည်းပါဘူး။
ဖြစ်နေတာက အရင် အစိုးရအဆက်ဆက်က ဖြစ်ခဲ့ပြီး နှစ်ရှည်လများ ဖြစ်ခဲ့နေတာတွေဆိုတော့ အချိန်ယူပြီး ပြုပြင်တည်ဆောက်ဖို့ နေပါတယ်။ FDI နဲ့ အရမ်းကြီးထွားလာတဲ့ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းကြီးတွေကတဆင့် တနိုင်တပိုင် လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းအသစ်တွေလည်း အများကြီးပေါ်လာပါတယ်။ ဥပမာ အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေအတွက် ပေကျံတဲ့ အထည်တွေကို လျှော်ဖွတ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ဖယ်ရီကားလုပ်ငန်းတွေ အလုပ်သမတွေ နေဖို့ အဆောင်ဌားစားတာမျိုးတွေ အလုပ်သမားတွေအတွက် အစားအစာရောင်းချတာတွေပါ။ ထပ်လုပ်လို့ ရပြီး မလုပ်သေးတဲ့ လုပ်ငန်းက စက်ရုံတွေက အလုပ်သမားတွေရဲ့ အစားအစာ စီစဉ်ပေးတဲ့ catering services တွေပါ။
အရင် မြန်မာနိုင်ငံက မွေးမြူရေးငါး ( ငါးမြစ်ချင်း ) အားလုံးကို အဓိက ဘင်္ဂလားဒေ့ကို ပို့ပါတယ်။ အဲဒီငါးမြစ်ချင်းအားလုံးကို အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေအတွက် catering လုပ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တဦးက အကုန်ဝယ်ပါတယ်။ သူက အလုပ်သမား ငါးသောင်းစာ အတွက် အစားအသောက် စီစဉ်ရောင်းချပေးတာပါ။ အဲဒါ မြန်မာနိုင်ငံက မွေးလို့ရပြီး ပို့သမျှ အကုန်ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထည်ချုပ် အလုပ်သမ လေးငါးသိန်းဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ် ထမင်းဟင်းချက်ပြီး ရောင်းပေးနိုင်ရင် လက်ရှိ တွံတေးက ငါးကန်တွေနဲ့ မလောက်ပါဘူး။ လက်ရှိထက် နောက်ထပ် ငါးဆလောက်ထပ်ပြီးတိုးမွေးမှ အခု လက်ရှိ အလုပ်သမားတွေကို လောက်ငအောင် ကျွေးနိုင်မှာပါ။ ဒါဆို ငါးစာတွေလည်း လက်ရှိထက် ငါးဆလောက်တိုးထုတ်ဖို့ လိုနေပြီလေ။ အဲဒီ ငါးစာ ငါးဆတိုးထုတ်ဖို့ ကုန်ကြမ်းဖြစ်တဲ့ ဖွဲနုတွေ ဆန်ကွဲတွေ ပြောင်းဆန် စတာတွေ ငါးဆလောက်ပိုလိုလာမှာလေ။ အဲဒီထပ်ပေါ်လာမဲ့ အလုပ်အတွက် အလုပ်နေရာ လက်ရှိထက် ဆယ်ဆမကပိုလိုမယ်ဆိုတာ ရှင်းပြစရာ မလိုဘူး ထင်ပါတယ်။
အခု KBZ ဘဏ်က စက်မူဇုံရှိတဲ့ လိုင်သာယာမြို့နယ်မှာ ဘဏ်ခွဲ ငါးခုဖွင့်ထားပါတယ်။ တခြားဘဏ်ကြီးတွေလဲ ရောက်နေပါပြီ။ လခထုတ်ရက်တွေမှာ ည ၁၂ နာရီလောက်အထိ ATM စက်တွေမှာ တန်းစီပိုက်ဆံထုတ်တဲ့ အလုပ်သမားတွေ အများကြီးပါ။ ရန်ကုန်က အပေါင်ဆိုင်တွေမှာ တနှစ်တနှစ် လေလံကြေးအမြင့်ဆုံးက စက်မူဇုံတွေရှိတဲ့ လိုင်သာယာဖြစ်နေပါတယ်။ မီးခွက်ဈေးက ဆန်ဆိုင်တွေက ပွဲရုံတန်းက ဆန်ပွဲရုံလောက်ကြီးနေပါတယ်။ FDI တွေမလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်သစ်တွေအများကြီးပေါ်နေပါပြီ။ မြင်အောင်ကြည့်တတ်ရင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဆင်ခြေဖုံး လိုင်သာယာ ဆိုပြီး နှာခေါင်းရှုံ့ ပြီး allergy ဖြစ်နေမဲ့အစား လေ့လာသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမြင်အောင်ကြည့်ရသလဲ အခု ပြောပြပါ့မယ်။ ပုံသေနည်းရှိပါတယ်။
၁။ လူတွေလုပ်နေရင် အလုပ်ဖြစ်လို့ပါ။ ပုံတူကူးပြီး လိုက်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ တခြားနေရာမှာ ရွေးလုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ မိတ္တူဆိုင်ဖွင့်တာ တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ အလုပ်ဖြစ်လို့ပါ။ လူနေစိတ်ပြီး ဆိုင်မရှိသေး
တဲ့ နေရာမှာ လုပ်လို့ရပါတယ်။
၂။ ချို့ယွင်းချက် လိုအပ်ချက်ရှိနေရင် ပိုက်ဆံရဖို့ အခွင့်အလမ်းပါ။ ဥပမာ - လမ်းပျက်တယ်။ မီးလည်း ခဏခဏပျက်တယ် ဆိုရင် ချို့ယွင်းချက်ရှိတာပေါ့။ လမ်းခင်းတဲ့ လုပ်ငန်း မီးပေးတဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရပါတယ်။
လူတွေက သူတို့ လိုအပ်ချက်အတွက် ပိုက်ဆံပေးကြပါတယ်။ နောက်ဥပမာ တခုပေးရရင် မြန်မာပြည်မှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်သမားတွေ မရှိကြပါဘူး။ ဒါလည်း အလုပ်သမားရော အလုပ်ရှင်ရော လိုအပ်ချက်ရှိနေ
တာပါ။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်သမားရှာပေးတဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ နောက်တခုက ကျွမ်းကျင်တဲ့ လုပ်သားဖြစ်လာအောင် သင်တန်းပေးလို့ရပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ သင်တန်းဖွင့်စားတာဟာ အကောင်း
ဆုံး လုပ်ငန်း တခုဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် သင်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေလည်း အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လိုအပ်ချက်တခုက နိုင်ငံရေးမှာပါ။ ပါတီကို ရွှေးပြီးမဲပေးလိုက်ပြီး အစိုးရသစ်တက်လာတော့ အတွေ့အကြုံ မရှိတဲ့
ကိုယ်စားလှယ်တွေခေါင်းဆောင်တွေ တက်လာပါတယ်။ သူတို့မှာ capacity building အရည်အသွေးမြင့်တင်ဖို့ လိုလာပါတယ်။ မြန်မြန်သွက်သွက် တိုင်းကျိုးပြည်ပြု အလုပ်လုပ်ချင်တော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ စာနယ်ဇင်းသတင်းသမားတွေအတွက် သင်တန်းတွေဖွင့်လို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ မိန့်ခွန်းပြောနည်းသင်တန်း public speaking ပေါ့။ ပြောလိုရာကို ထိထိမိမိ တိုတိုတုတ်တုတ် ပြော
နိုင်အောင်ပါ။ နောက်တခုက စာပိုဒ် တခု မိန့်ခွန်းတခုရဲ့ ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ် implied meaning သွယ်ဝိုက် အဓိပ္ပာယ် တို့က ဘာလဲဆိုတာမျိုးကို သတင်းသမားတွေကို သင်တန်းပေးသင့်ပါတယ်။ အရင် သမ္မတတုန်းက နွားနို့သောက်ဖို့ ပြောတယ်။ ဝန်ကြီးက ပါးရိုက်ဖို့ ပြောတယ်။ အခု အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်က ဟင်းတနှပ်လျှော့စားဖို့ ပြောတယ်တို့ဆိုပြီး သတင်းရေးကြတာဟာ သတင်းသမားေ
တွနားမလည်တာပါသလို တမင် ဒေါက်ဖြုတ်တာလည်းပါပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းသမားကျင့်ဝတ်ဆိုတာမျိုးလည်း သင်တန်းပေးဖွင့်သင့်တာပေါ့။
၃။ နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရ သူ့ရဲ့ မူဝါဒတွေက လူတယောက်အတွက် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြီးဆုံး စီးပွားဘက်ပါ။
အစိုးရက လုပ်စေချင်တာဟာ နိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်ပါ။ နိုင်ငံတနှိင်ငံမှာ အများဆုံးရောင်းနိုင်တာ အစိုးရကိုပါ။ ဂွင်ရိုက်စားဖို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရ မူဝါဒအတိုင်း လိုက်လုပ်ဖို့ဘဲ လိုတာပါ။ အစိုးရက ပွဲရုံရွှေ့ဖို့ စီစ
ဉ်ရင် လိုက်ရွှေ့ပါ။ export import လုပ်ခွင့်ပြုတယ် ဆို လိုက်လုပ်ပါ။ အစိုးရက စက်မူဇုံထောင်ပြီး စက်ရုံလုပ်စေချင်ရင် လုပ်လိုက်ပါ။ အစိုးရက ဟိုတယ် လုပ်စေချင်ရင် လုပ်လိုက်ပါ။ လုပ်မိတဲ့သူ မှန်နေပါတယ်။
အချိန် နဲနဲစောင့်ဖို့ လိုချင်လိုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး အစိုးရ လုပ်စေချင်တာ လုပ်မိတဲ့လူတွေက ပို အဆင်ပြေကြပါတယ်။
အလုပ်လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေး အများကြီးတွေ့ပြီ ဆိုပါတော့ ဘယ်အလုပ် ရွှေးရင် ကောင်းမလဲ။
၁။ လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ရွှေးပါ။
လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တိုင်း ကောင်းပါတယ်။ မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တိုင်း မကောင်းပါဘူး။
၂။ လုပ်ချင်တဲ့အလုပ် လုပ်ပါ။
ပြိုင်ဆိုင်ပြီး လုပ်ရမှာဆိုတော့ အားနဲ့မာန်နဲ့ မမောနိုင် မပန်းနိုင် တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် လုပ်နိုင်ဖို့က ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးတိုးတက်နေတယ် ဆိုတာ အစိုးရက အာချောင်ပြီး မဲရအောင် ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တကယ်ပါ။ နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်နေတဲ့ ရေစီးကြောင်းကို သတိထားမိရင် စီးပွားရေးတိုးတက်တဲ့
အထဲ သူငယ်ချင်းလည်းပါနိုင်ပါတယ်။ သတိမထားမိရင်တော့ ကျန်ခဲ့မှာပါ။
Dr. Tin Sein
အပိုင်း ၂ မှာ FDI ရောတကယ် အခြေအနေကောင်းရဲ့လား အစိုးရ ဘာလုပ်သင့်လဲ ရေးထားပါတယ်။
Labels: Political articles, စီးပွားရေး, စီမံခန့်ခွဲရေး
၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ခြင်းဆိုတဲ့ အလှူဒါနသည် ၀ိသာခါကျောင်းအမကြီးကျေးဇူးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်သည်။
ထိုအလှူကို လှူသူတိုင်းက ၀ိသာခါ ကျောင်းအမကြီးကို အားကျ အမှတ်ရကြပါလိမ့်မည်။
ကျောင်းသွားရင်လည်း လက်ဗလာချည်း သွားလေ့သွားထ မရှိ၊ မနက်ပိုင်းသွားရင် မနက်အတွက် ရဟန်းသာမဏေများ ဘုန်းပေးနိုင်တဲ့ အစားအစာများ၊ ညနေပိုင်းသွားရင်လဲ ညနေပိုင်းအတွက် အဖျော်ရည်များ ယူဆောင်သွားလေ့ရှိသည်။ စာထဲမှာတော့ ကျောင်းအမကြီးလာရင် ကိုရင်ငယ်လေးတွေက ကျောင်းအမကြီး လက်ထဲ ဘာပါလဲဆိုတာ ကြည့်ကြသတဲ့။
ထိုအဖြစ်ကို သိသော အနာထပိဏ်၊ ၀ိသာခါတို့သည်
၀ိသာခါသည် အသိလိမ္မာရှိသူဖြစ်သည်ဖြစ်ရာကား မိုးရွာတုန်း အ၀တ်မပါဘဲ ရေချိုးနေကြသော ရဟန်းတွေပဲဖြစ်မည်ဟု သိသဖြင့်နောက်တစ်ကြိမ် ကျောင်းသို့ သွားပင့်ခိုင်းပြန်သည်။
ထိုအချိန်မှာတော့ ရဟန်းတော်များ သင်္ကန်းများယူဆောင်ပြီး မိမိတို့ အသကအသက နေရာမှာ သွားပြီး ရေချိုးပြီး စိုရွှဲနေသော ခန္ဓာကို ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်နေရသည်။
၀ိသာခါသည် ဒီအခြင်းအရာကိုလည်း သိသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်ကျောင်းသို့ လွှတ်ပြန်သည်။ ထိုအချိန်မှာတော့ ဆွမ်းစားကြွချိန်တန်ပြီးဖြစ်၍မြတ်စွာဘုရားက ရဟန်းတော်အားလုံးသင်္ကန်းများ ပြင်ဆင်ပြီး စုရုံးခိုင်းသည်။
ဘုရားရှင်၏ တန်ခိုးဖြင့် ၀ိသာခါအိမ်ပေါက် ရောက်သွားသည့်
အခါ ၀ိသာခါ အံ့ကြရပြန်သည်။ စောစောလေးကမှ မိုးအကြီးအကျယ် ရွာထားသဖြင့် လမ်းတစ်လျှောက်လုံးသည် ခါးလောက် မြုပ်နိုင်လောက်အောင် ရေတွေဖြင့် လွှမ်းနေသည်။
ဘုရားနှင့်ရဟန်းသံဃာများ ဆွမ်းကပ်ပြီး ကျောင်းအမကြီးသည် အရှင်ဘုရားအား တပည့်တော် ဆုလာဘ် ၈ မျိုး သနားချီးမြောက်တော်မူပါဘုရားဟု လျှောက်ထားလေသည်။
အပ်စပ်သောဆုဆို တောင်းစေ ဟု ဘုရားခွင့်ပြုတော်မူသောကြောင့် အောက်ပါဆို ဆု ၈ မျိုးကို တောင်းသည်။ ဘုရားလည်း ခွင့်ပြုသည်။
သင်္ကန်းလှူရခြင်းကြောင့် သေချာတဲ့ အကျိုးကတော့ ရဟန်းတော်များ သင်္ကန်းအတွက် မပူရ မပင်ပန်းရခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ရဟန်းအလုပ် ချမ်းချမ်းသာသာ လုပ်နိုင်သည်။ ထိုသင်္ကန်းက ထိုအသုံးပြုသော ရဟန်းအား အရှက်ကိုလည်း ကာကွယ်မည်။
အချမ်း အပူ လေ နေစတဲ့ ရာသီဥတုဒဏ်ကိုလည်း ဆောင့်ရှောက်မည်။ မှည့်, ခြင်, ယင်, ပိုးမွှားစသော အန္တရာယ်မှလည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သဖြင့် ရဟန်းအလုပ်ကို ချမ်းချမ်းသာသာ လုပ်ခွင့်ရမည်။ လှူတဲ့သူမှာ တန်ပြန်အနေနဲ့ ထိုအကျိုးများရရှိမည်။
အမျိုးသားများအတွက်တော့ ဧဟိဘိက္ခုနဲ့ ရဟန္တာ ဖြစ်ခွင့်ရမည်။
ဘုရားလက်ထက်က ပဉ္စ၀ဂ္ဂီတို့ ယသအမျိုးကောင်းသားတို့သည် ရှေးက သင်္ကန်းပရိက္ခရာလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ဘုရားနဲ့တွေ့တော့ သိမ်တွေ ကမ္မ၀ါတွေ ရွတ်ဖတ်ပေးစရာမလိုဘဲ သင်္ကန်းသပိတ် ရှာစရာ မလိုဘဲ ဘုရားက ‘‘ဧဟိ ဘိက္ခ’’ ငါ့ရှင် ရဟန်း လာခဲ့ လို့ ခေါ်လိုက်ရုံနဲ့ အလိုအလျောက် ၀ါတော် ၆၀ ရ မထေရ်ကြီးကဲ့ သပ္ပါယ်တင့်တယ်စွာ ဖူးမျှော်ရသည်။
ဘာဟိယဒါရုစိယ အမျိုးသားသည် ဘုရားနဲ့တွေ့လို့ တရားနာလိုက်ရခြင်းကြောင့် ရဟန္တာဖြစ်သွားပါလျက် သင်္ကန်းပရိက္ခရာ မရှိလို့ ရဟန်းမဖြစ်လိုက်ရ။
ဘုရားကလဲ သူ့ရဲ့အတိတ်က သင်္ကန်းလှူခဲ့တဲ့ ဒါန မရှိခဲ့တော့ ဧဟိ ဘိက္ခု ခေါ်ခွင့်မရ၍ လမ်းမှာပဲ နွားမခွေ့သတ်လို့သေရသည်။
ရဟန္တာဖြစ်လျှင် လူဝတ်ကြောင်ဘ၀နဲ့ ရပ်တည်ခွင့်မရ၊ ရဟန်းပြုရင် ပြု မပြုလျှင်တော့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရသည်။ ဘာဟိယဒါရုစိယ အမျိုးသားကတော့ ရှေးက၀ဋ်ကြွေးကြောင့် ထိုနေရာမှာပဲ ဘီလူးမ ဟန်ဆောင်သော နွားမခွေ့အသတ်ခံရသည်။
ဤသို့အားဖြင့် အလွယ်တကူ ရဟန်းဖြစ်ခွင့် ရဟန္တာဖြစ်ခွင့်များ ရလိုပါလျှင် သင်္ကန်းလှူကြပါလေ--
Posted by Alex Aung at 5:37 AM No comments:
မိဘတိုင်းလိုလို ကိုယ့်ကလေးကို စာတော်စေချင်ကြပါတယ်။ စာထူးချွန်စေချင်တော့ ကျူရှင်တွေ၊ သင်တန်းတွေ နင်းကန်ပို့ပေးတယ်။ အိမ်မှာ ဆရာခေါ်သင်ပေးတယ်။ ဆရာတွေကို စုပြီး စာသင်ဝိုင်းထောင်ပေးတယ်။ ကျောင်းပြောင်းတယ်၊ မြို့ ပြောင်းတယ် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ကြိုးပမ်းပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာတော်စေချင်ရင် စာကိုကြိုးစားရပါမယ်။ မိဘရဲ့ အရိပ်အကဲ အောက်မှာ စာကြိုးစားခြင်းထက် ကိုယ့်အသိနဲ့ စာကြိုးစားခြင်းဟာ ပိုမိုပေါက်မြောက်ပါတယ်။ ကလေးများကို စာကြိုးစားတဲ့ အကျင့်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရင် ကျူရှင်တွေ၊ သင်တန်းတွေထက် ပိုမို ထိရောက်ပါတယ်။ အကျင့်အကြောင်းဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်...
အကျင့်ဆိုတာ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အလေ့အထ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတာကို အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရင် ကောင်းတဲ့ အလေ့အထ ရလာသလို၊ ဆိုးတာကို အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ရင်လည်း ဆိုးတဲ့ အလေ့အထ စွဲကပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလေ့အထ အားလုံးဟာ အကျင့်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ စာကြိုးစားတဲ့ အကျင့်ဆိုတာ စာလုပ်ရတာ တက်ကြွပျော်ရွှင်တဲ့ အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကျင့်တွေကို ဘယ်လိုမွေးမြူသင့်ပါသလဲ......
၁။ သူများစကားပြောတာကို သေချာနားထောင်တတ်တဲ့ အကျင့်
သူများပြောစကားကို သေသေချာချာ နားထောင်တတ်ခြင်းဆိုတာ သူများကို လေးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူများပြောစကားကို သေသေချာချာနားထောင်တတ်တာ ကြာသွားရင် သူများပြောစကားကို ဘယ်တော့မှ ဖြတ်ပြီး မပြောတဲ့အပြင် သူများပြောစကားရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်ကို အလေးထားတတ်သွားပါတယ်။ အဲဒီ အရေးကြီးတဲ့ ပွိုင့်ကို ဖမ်းယူနားထောင်တတ်တဲ့ အကျင့်ဟာ စာတော်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။
၂။ သေချာသပ်ရပ်တဲ့ အကျင့်
စာပဲရေးရေး၊ စာမေးပွဲပဲ ဖြေဖြေ သေချာသပ်ရပ်တဲ့သူဟာ အမြဲတမ်း အသာစီး ရတတ်ပါတယ်။
ကလေးများ ငယ်ငယ်ကတည်းက အိမ်စာလုပ်ရင် ခဲဖျက်ခဏခဏ မသုံးမိအောင် ပျိုးထောင်ပေးပါ။ လက်ရေးလက်သားကို ဂရုတစိုက် ပျိုးထောင်ပေးပါ။ သေချာသပ်ရပ်တဲ့ အကျင့်ကို ငယ်စဉ်အခါက စတင်ပျိုးထောင်ရင် ပိုမိုထိရောက်တတ်ပါတယ်။
၃။ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲ တတ်တဲ့အကျင့်
တချိန်မှာ ကျောင်းစာတစ်ဘာသာကိုသာ အာရုံစူးစိုက်စွာလုပ်တတ်ခြင်း၊ အချိန်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် စီမံခန့်ခွဲတတ်ခြင်း၊ အားလပ်တဲ့ ဆယ်မိနစ်၊ ဆယ့်ငါးမိနစ်ကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးချတတ်ခြင်း၊ စသည်တို့ဟာ အချိန်ကို အများကြီး ဆွဲထုပ်နိုင်တဲ့ အကျင့်များဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအကျင့်ကို ပိုင်နိုင်သွားရင် စာလုပ်စရာရှိရင် စာကောင်းကောင်းလုပ်၊
ဆော့ကစားစရာရှိရင် ကောင်းကောင်းကစား၊ လည်စရာရှိရင် အားရပါးရ လည်နိုင်တဲ့ အဆင့်ရောက်သွားပါတယ်။ စာကျက်တဲ့အခါ ကစားတဲ့ဘက်ကို စိတ်ရောက်၊ ကစားတဲ့ အခါကျတော့ စာကို ပြန်ပူတတ်တဲ့ အဖြစ်ဆိုးမှ
၄။ ကြိုတင် သင်ခန်းစာ လေ့လာတတ်တဲ့အကျင့်
ကျောင်းမှာ ဆရာစာမသင်ခင်မှာ အဲဒီသင်ခန်းစားကို တစ်ခေါက်ကြို ဖတ်ထားရင် စာသင်ချိန်မှာ နားလည်ဖို့ ပိုမိုထိရောက်တတ်ပါတယ်။ ပိုမိုပြီးလည်း မှတ်မိစေပါတယ်။ နားလည်လည် မလည်လည် သင်မယ့်စာကို ကြိုဖတ်တတ်တဲ့ အကျင့်မွေးမြူကြည့်ပါ။ အလွန်အထောက်အကူ
၅ ။ စာသင်ခန်းထဲမှာ သေသေချာချာ နားထောင်တတ်တဲ့အကျင့်
စာသင်တာကို သေသေချာချာ အာရုံစိုက် နားထောင်တဲ့ကလေးဟာ စာပိုမိုထူးချွန်ကြပါတယ်။ စာကို ပိုပြီးနားလည်ပါတယ်။ ပိုပြီးလည်း မှတ်မိပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းကိုလည်း
၆ ။ စာသင်ခန်းထဲမှာ မှတ်စုပြုတတ်တဲ့ အကျင့်
စာသင်တာကို သေသေချာချာ နားထောင်နေတဲ့ အချိန်မှာ မျဉ်းတားစရာရှိတာကို မျဉ်းတား၊ ဘေးမှာ ရေးမှတ်စရာရှိတာကို ရေးမှတ်၊ ကြယ်ပြသင့်တဲ့နေရာမှာ ကြယ်ဆွဲထား၊ အရေးပါတဲ့ ဝေါဟာရကို သေသေချာချာ ရေးမှတ် စသည်ဖြင့် မှတ်စု ရေးမှတ်တတ်သွားရင်၊ နားလည်ဖို့
အတွက်ဖြစ်ဖြစ်၊ မှတ်မိဖို့ အတွက်ဖြစ်ဖြစ် တော်တော် အကူအညီ ပေးတာကို
၇။ သင်ခန်းစာ ပြန်နွှေးတတ်တဲ့ အကျင့်
အတန်းချိန်ပြီးဆုံးလို့ ချက်ချင်း အိမ်စာမလုပ်သေးပဲ သင်ပြီးသင်ခန်းစာများကို သေသေချာချာ
ပြန်နွေးသင့်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာမှာ ဘာအကြောင်းအရာတွေပါသလဲ၊ ခြုံငုံသုံးသပ်လိုက်ရင် အနှစ်ချုပ်က ဘာတွေလဲ၊ အကြောင်းအရာ အချင်းချင်း ဘာတွေဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ကြသလဲ၊ အယူအဆချင်း ဘယ်လို ကွာခြားသလဲ၊ စသည်ဖြင့် ပိုင်းခြားစိပ်ဖြာပြီး သိပ်မရှင်းသေးရင် ထပ်မေး၊ အားလုံးရှင်းသွားတဲ့အခါမှာ ဦးနောက်ထဲ တစ်ခါတည်း ထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။
၈။ အိမ်စာကို ပြီးဆုံးအောင် လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်
တစ်နေ့ အိမ်စာကို တစ်နေ့ ပြီးဆုံးအောင်လုပ်သင့်ပါတယ်။ အိမ်စာကို စုပုံပြီး အိမ်စာထပ်ခါနီးကျမှ တပြိုင်တည်း လောလော လောလော လုပ်တာမျိုးကို လုံးဝ ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ အိမ်စာကို ပြီးအောင်မြန်မြန်လုပ်ခြင်းထက် ကောင်းအောင်လုပ်ခြင်း ဆိုတဲ့ အကျင့်ကို မွေးမြူထားရပါမယ်။
၉ ။ များများ သံသယ၀င်၊ များများတွေးခေါ် ၊ များများ မေးမြန်းတတ်တဲ့ အကျင့်
စာပါအကြောင်းအရာကို သံသယ ၀င်တတ်ခြင်း၊ ၀င်ရဲခြင်းကို Critical Thinking လို့ခေါ်ပါတယ်။ သံသယ ၀င်လေ အဖြေမှန်ကို ရှာဖွေတတ်လေ ဖြစ်ပါတယ်။ သံသယ ၀င်ရဲတယ်။ အတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေကို တွန်းလှန်ရဲတယ်။ ဆွေးနွေးရဲတယ်။ ငြင်းခုံရဲတယ်။ အဖြေမှန်ကို ရှာဖွေရဲတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအဖြေမှန်ကိုလည်း ထိထိမိမိ ရှင်းပြတတ်တယ်။ ဒီအကျင့်ဟာ အတန်းကြီးလေ၊ အရေးပါလေဖြစ်တယ်။
၁၀။ မတူညီတဲ့ အမြင်ကို တင်ပြရဲတဲ့ အကျင့်
သံသယ ၀င်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိလေ၊ မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ အမှန်တရားကို
ချဉ်းကပ်တတ်လေ၊ မတူညီတဲ့ အမြင်ကို တွေ့ရှိလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခွင့်ကြုံရင် အဲဒီမတူညီတဲ့ အမြင်ကို တင်ပြရဲတဲ့ အကျင့်ရှိရပါမယ်။
၁၁။ ပူးပေါင်း စူးစမ်းလေ့လာ တတ်တဲ့အကျင့်
အတူလေ့လာခြင်း၊ ပူးပေါင်းပြီး အဖြေရှာဖွေတတ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းပြီးစူးစမ်းလေ့လာတတ်ခြင်း၊
ပူးပေါင်းလေ့လာပြီး ဆွေးနွေးမယ်၊ ငြင်းခုံမယ်၊ အမြင်တူအောင် ညှိနှိုင်းမယ်။ အဖြေမှန်ကို
ရအောင်ရှာဖွေမယ်။ စသည့် အကျင့်များဟာ စာတော်ဖို့ အတွက် အကျင့်ကောင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
Credit to>>ဆရာ Aung Ko Latt
အရှင်သုမင်္ဂလ အကောင့်မှ ပြန်လည်မျှဝေ၏
Posted by Alex Aung at 1:28 AM No comments:
သဘာဝအလျောက် ဖြစ်တည်နေသော ဓာတုပစ္စည်းများထက် လူတို့တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော ဓာတုပစ္စည်းအရေအတွက်က ပိုမိုများပြားနေသော ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် ပလတ်စတစ်သည်လည်း လူလုပ်ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်သည်။
အင်္ဂလိပ်လူမျိုး သိပ္ပံပညာရှင် Alexander Parkes က ၁၈၆၂ ခုနှစ်တွင် လန်ဒန်မြို့၌ ကျင်းပ သော Great International Exhibition နိုင်ငံတကာပြပွဲကြီး၌ လူသိ ရှင်ကြားထုတ်ပြန်ပြသခဲ့သော Parkesine အမည်ရှိ အော်ဂဲနစ်ဓာတုပစ္စည်းမှာ လူတို့ပြုလုပ်သော ပထမဆုံး ပလတ်စတစ်ပင် ဖြစ် သည်။ Parkesine သည် Cellulose အော်ဂဲနစ်ပိုလီမာမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး အပူပေး၊ ပုံသွင်း နိုင်သော လူလုပ်ဓာတုပစ္စည်း ဖြစ်သည်။
ပလတ်စတစ်ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်သော ပေါ့ပါးခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းခြင်း၊ ရေငွေ့ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ခိုင်ခန့်ခြင်းတို့အပြင် ဈေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း အထိုက်အလျောက်ချိုသာမှုတို့ကြောင့် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် များ အတွင်းမှ စတင်ကာ နှစ်ပေါင်းခုနစ်ဆယ်နီးပါးအတွင်း ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှု ကျယ်ပြန့်လာပြီး အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများအပါအဝင် များစွာသော လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တို့တွင် ပလတ်စတစ်ကို အသုံးပြုလာကြသည်။
သို့ရာတွင် ထိုသို့များပြားလှသော လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ထုတ်လုပ်သည့် ပလတ်စတစ် ထုတ်ကုန်များသည် အဆုံးတွင် အသုံးမပြုစွန့်ပစ်သည့်အနေအထား သို့ ရောက်ရှိသည့်တိုင် ယင်းတို့၏ ဇီဝဗေဒဖြစ်စဉ်အရ ပြိုကွဲမှုမရှိသည့် ဂုဏ်သတ္တိမှာ ကျန်ရှိနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းကြီးမား လှသော ပလတ်စတစ်၏ ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် လူတို့တပ်မက်မှု အလွန်အကျွံ သုံးစွဲမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် အသုံးပြုပြီး ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ရာမှ ညစ်ညမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေကာ သက်ရှိဖြစ်တည်မှု သဘာဝကိုပင် အန္တရာယ်ပေးနိုင်သည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စွန့်ပစ် နေကြသော ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများက မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေများကိုသာမက သမုဒ္ဒရာရေပြင်တို့တွင်ပင် ပလတ်စတစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ညစ်ညမ်းမှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။
၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်း စတင်၍ အသုံးတွင် ကျယ်လာသော ကမ္ဘာ့ပလတ်စတစ်ထုတ် လုပ်မှုမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မက်ထရစ်တန်ချိန် ၃၃၅ သန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ယင်းထုတ်လုပ်မှု အနက် ဥရောပတိုက်တစ်ခုတည်းမှ ထုတ်လုပ်မှုမှာ တန်ချိန် သန်းပေါင်း ၆၀ အထိရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထုတ်လုပ်မှုမှာ ကမ္ဘာ့ထုတ်လုပ်မှု၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့်အထိရှိကြောင်း၊ Statista.com အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှု မက်ထရစ်တန်ချိန် ၁.၅ သန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်၊ ၇၀ ကာလအတွင်း ပလတ်စတစ်အသုံးဝင် မှု တွင်ကျယ် လာပုံကို သိမြင်နိုင်ပေသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် တွင် ကမ္ဘာ့ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုသည် ကမ္ဘာ့သံမဏိ ထုတ်လုပ်မှုထုထည်ပမာဏကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုပေါင်း ၃၂၂ ဘီလျံလီတာရှိကာ ကမ္ဘာ့သံမဏိထုတ်လုပ်မှုမှာ ၂၀၃ ဘီလျံလီတာမျှသာရှိကြောင်း Plastic Europe အမည်ရ ဥရောပပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း၏ အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြထား သည်။
ထိုမျှ များပြားလှသော ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတို့မှာ အသုံးမပြုစွန့်ပစ်သည့်အနေအထားသို့ ရောက် ရှိသည့်တိုင် ပလတ်စတစ်၏မူလဂုဏ်သတ္တိများ ပျက်ပြယ်မသွားဘဲရှိရာမှ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ၇၀ ခန့်အတွင်း ထွက်ပေါ်လာသည့် ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအနက်မှ ပလတ်စတစ်တန်ချိန် ၂၆၉ဝ၀ဝ နီးပါးမှာ ကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာများအတွင်း ရောက်ရှိနေကြောင်း PLOS ONE အမည်ရ သိပ္ပံဂျာနယ် တစ်စောင်က ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေသောစာစောင်၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများ ရရှိရန်အတွက်5Gyres Institute သုတေသနအဖွဲ့မှ ဒါရိုက်တာ Marcus Eriksen အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်းခြောက်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များက အပူပိုင်းဒေသရေဝဲငါးခု၊ သြစတြေးလျကမ်းရိုးတန်း၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် မက်ဒီတရေးနီးယန်းပင်လယ်တို့တွင် ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ ခြောက်နှစ်ကြာ အချိန်ယူသုတေသနပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် Science သိပ္ပံဂျာနယ်ကလည်း လူတို့နေထိုင်ရာ ကုန်းမြေ များမှ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်သို့ စွန့်ပစ်နေသော ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏအား တွက်ချက် ဖော်ပြထားသည့် anta Barbara’s National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS) ၏ သုတေသနစာတမ်းကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ NCEAS ၏ သုတေသနစာတမ်းအရ တစ်နှစ် လျှင် ပလတ်စတစ်တန်ချိန်ရှစ်သန်းခန့်မှာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်သို့ ဝင်ရောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ထိုအရေအတွက်မှာ ကမ္ဘာ့ကမ်းရိုးတန်းစုစုပေါင်း အလျားတစ်လျှောက် ပလတ်စတစ် များ ထည့်ထားသော ကုန်စုံဆိုင်သုံး အိတ်ငါးလုံးကို တစ်ပေခြားစီ တန်းစီချထားခြင်းနှင့် ညီမျှသည်ဟု ဆို သည်။ အဆိုပါနှုန်းထားမှာ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် နှစ်ဆအထိ မြင့်တက်လာနိုင်ကာ ကမ်းရိုးတန်းအလျား တစ်ပေတိုင်းတွင် ပလတ်စတစ်ထည့်ထားသော အိတ်ဆယ်လုံးကျစီ တန်းစီချထားခြင်းနှင့် ညီမျှသည် ဟု ဆိုသည်။
အာရှတိုက်နှင့် မြောက်အမေရိကတိုက်အကြား ခရီးတစ်ဝက်ခန့်နေရာရှိ ဟာဝေယန်ကျွန်းစုများ မြောက်ဘက်မှ Midway Atoll အမည်ရ သန္တာကျောက်ကျွန်းသည် ကျွန်းပတ်လည်တွင် မိုင်ထောင်ချီ သောရေပြင်သာ ဝိုင်းရံထားသည့်နေရာဒေသဖြစ်ပြီး လူတို့ရောက်နိုင်ခဲသော ဒေသဖြစ်သည့်တိုင် မြောက် ပစိတ်ဖိတ်ရေဝဲများက သယ်ဆောင်လာသော စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်အကျိုးအပဲ့အစအန အမြောက်အများ တင်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိကြရသည်။ Midway ကမ်းခြေများမှာ သဲအစား သန်းနှင့်ချီသော ပလတ်စတစ် အကျိုးအပဲ့အစအနများဖြင့်သာ ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။
ကမ်းခြေတွင် တင်ရှိနေသော ငှက်သေများမှာ ထောင်သောင်းချီ၍ ရှိနေပြီး ငှက်တို့၏ရုပ်ခန္ဓာက ဇီဝဖြစ်စဉ်အရ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားသည့်တိုင် ယင်းတို့၏ဝမ်းဗိုက်နေရာ၌ အရောင်မျိုးစုံသော ပလတ် စတစ်ပစ္စည်းများမှာ ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ အကောင်းပကတိပင် ရှိနေသည်။ သေးငယ်သော အရောင်စုံ ပလတ်စတစ်အစိတ် အပိုင်းများကို ငှက်တို့က အစာအမှတ်ဖြင့် စားသောက်ရာမှ ပလတ်စတစ်အဆိပ် သင့် သေဆုံးကြရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကျွန်းတွင် ပင်လယ်စင်ရော်ငှက်ကြီးများ၊ တစ်သန်းခွဲမျှအထိ ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းရပြီး ယင်းတို့အနက်မှ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်မှာ အစာချေစနစ်အတွင်း ပလတ်စတစ် အဆိပ်သင့်မှုဖြင့် သေဆုံးကြရကာ Midway သန္တာကျောက်ကျွန်းမှာ ပင်လယ်စင်ရော်တို့၏ သုသာန်မြေ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ပင်လယ်စင်ရော်တို့သာမက အခြားသောရေနေသတ္တဝါများဖြစ်ကြသည့် ဝေလငါး၊ ပင်လယ်ဖျံ နှင့် အခြားငှက်မျိုးစုံတို့သည်လည်း ပင်လယ်ရေပြင်၌ ပလတ်စတစ်များကြောင့် အသက်ဘေးကျရောက် လျက် ရှိသည်။ Green Peace အဖွဲ့က ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ် ပြန်ခဲ့သော Plastic Debris in the World’s Oceans အမည်ရ အစီရင်ခံစာ၌ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကြောင့် သက်ရှိမျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၆၇ မျိုးမှာ အသက်ဘေးကျရောက်လျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ National Oceanographic and Atmospheric Administration ကလည်း စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကြောင့် ရေငန့်နို့တိုက် သတ္တဝါတစ်သိန်းခန့်၊ နှစ်စဉ်သေဆုံးနေသည်ဟု ခန့်မှန်းရကြောင်း၊ အလားတူငှက်နှင့်ငါးအရေအတွက် သန်းချီ၍ သေကြေပျက်စီးနေရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ပင်လယ်ရေပြင်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာ သိပ္ပံနည်းကျအမြင်များ ဖော်ထုတ်ရန် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ က ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့် တွဲဖက်ဖွဲ့စည်းပေးထားသော Joint Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Pollution (GESAMP) က ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ပြင်ညစ် ညမ်းမှု၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း သည် ကုန်းမြေဒေသမှ မြစ်ဖျားခံကြောင်းနှင့် ယင်းတို့အနက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များသည် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်အတွင်း ရေဝဲကြီးများဖြင့် လိုက်ပါလာကာ ကြီးမားသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဒိုက်ပုံကြီး (Garbage Patches) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ သည်။ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ မြောက်ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိရသော Great North Pacific Garbage Patch အကြောင်းကို Captain Charles Moore ဆိုသူက ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် စတင်ဖော်ပြခဲ့ရာမှ အဆိုပါ ဒိုက်ပုံကြီးများအကြောင်းကို ကမ္ဘာ့လူထုက သိရှိလာကြသည်။ အခြားသော ရေပြင်များတွင် လည်း အလားတူ ဒိုက်ပုံကြီးများ တွေ့ရှိနိုင်မည်ဟု လည်း မျှော်လင့်ရသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်တို့ကလည်း ပလတ်စတစ်ကို အပြည့်အဝပြိုကွဲပျက်စီးခြင်း မရှိသည့် တာရှည်ခံညစ်ညမ်းပစ္စည်းအဖြစ် ရှုတ်ချကြသည်။ ယူကေနိုင်ငံ၊ University of Plymouth မှ University of Plymouth ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာ ရေးအစီအစဉ်တစ်ရပ်တွင် ဥရောပ၊ အမေရိက၊ သြစတြေးလျ၊ အာဖရိက၊ အန္တာတိကရေပြင်နှင့် ကမ်းခြေ များတွင် လုပ်ငန်းသုံးနှင့် အိမ်သုံးပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ရေသူမ မျက်ရည် University of Plymouth ဟု မီဒီယာတို့က တင်စားခေါ်ဆိုသော ပလတ်စတစ်စေ့အများ အပြားတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အချို့သော ပလတ်စတစ်စေ့များမှာ အလွန်တရာသေးငယ်လှပြီး ဆံချည်မျှင် တစ်မျှင်၏အချင်းထက်ပင် သေးငယ်သည့်အရွယ်အစားအထိ ရှိကြသော်လည်း ပလတ်စတစ်၏ဂုဏ် သတ္တိများ ပျောက်ပျက်မသွားဘဲ ရှိနေသည်။ ယင်းတို့သည် သာမန်မျက်စိဖြင့် မြင်တွေ့နိုင်ခြင်းမရှိ၊ သဘာဝအလျောက် ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းလည်းမရှိဘဲ ရေနေသတ္တဝါများနှင့် ရေပြင်တွင် မျောပါနေသော ပိုးမွှားများ ငါးသားလောင်း များ၏ အစာချေစနစ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကြသည်။
ပင်လယ်ရေပြင်အတွင်း တန်နှင့်ချီ၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေါလောပေါ်နေသော စွန့်ပစ်ပလတ် စတစ်ပစ္စည်းများက ရေပြင်ကို ညစ်ညမ်းစေသည့် ပျောက်ပျက်နိုင်ခဲသော ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် အဆိပ်သင့်စေသည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။
၂၀ဝ၉ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲတစ်ရပ်၌လည်း Great North Garbage Patch မှ ယူဆောင်လာသည့် ပင်လယ်ရေနမူနာတွင် မူလဂုဏ်သတ္တိ ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိသေးသော ပလတ်စတစ်အမှုန် များ ပါဝင်နေသည်ကို လက်တွေ့ပြသခဲ့သည်။
ရေနေသတ္တဝါမှန်သမျှသည် တစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ်တွင် စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များမှ ထုတ်ပေး သည့် ဓာတုဗေဒအဆိပ်များ ပါဝင်သော ပင်လယ်ရေကို သောက်သုံးမိမည်ဖြစ်ရာ အဆိပ်သင့် ပလတ် စတစ်ကို စားသုံးမိသည့်ငါးအား ဝါးမျိုထားသည့်ငါးတို့ကို လူတို့က ဖမ်းဆီးစားသုံးကြပြန်ခြင်းဖြင့် လူတို့သည် မိမိတို့ စွန့်ပစ်သောပစ္စည်းများကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်စားသုံးနေသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
သိပံ္ပပညာရှင်များ၏အဆိုအရ ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းရှိ ရေဝဲစီးကြောင်းများထက် လေးဆခန့် ကြီးမားသော ရေဝဲ စီးကြောင်းများရှိရာ ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်းဒေသရေပြင်များ တွင်လည်း Great North Pacific Garbage Patch နှင့် အလားတူ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဒိုက်ပုံကြီးများ တွေ့ရှိရနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်း ကြသည်။
ပလတ်စတစ်ဆိုသည်မှာ အပူပေးပုံသွင်း၍ရသော အော်ဂဲနစ်ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည်ဟု အကြမ်းဖျဉ်း အားဖြင့် ဆိုနိုင်သည်။
ဓာတုဗေဒပညာရပ်အရ ဆိုရပါက ပလတ်စတစ်သည် ပိုလီမာ (Polymer) ဟု ခေါ်ဆိုသော မော်လီကျူးကြီးများ ဖြစ်သည်။ ယင်းပိုလီမာများတွင် ကာဘွန် မဏ္ဍိုင်ပြု မိုနိုမာ (Monomer) ခေါ် အစိတ်အပိုင်းများ များစွာပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပိုလီမာများကို ပုံသွန်းလောင်း၍ ရနိုင်သော သာမို ပလတ်စတစ် (Thermo-plastic) နှင့် ပုံသွန်းလောင်း၍ မရသော သာမိုဆက် (Thermosets) ဟူ၍ နှစ်မျိုးနှစ်စား ခွဲခြားနိုင်သည်။
အသုံးများသော ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားများမှာ PET (သို့) ETE (Polyethylene Terephthalate), HDPE (Hight Density Polyethylene), PVC (Polyvinyl Chloride), LDPE (Low Density Polyethylene), PP (Polypropylene), PS (Polystyrene) စသည်တို့ ဖြစ်ကြ သည်။
PET အမျိုးအစားကို ဖျော်ရည်၊ သောက်ရေ၊ ဘီယာ၊ ပါးစပ်ဆေးရည်၊ ဆပ်ပြာမှုန့် အစရှိသည့် ကုန် ပစ္စည်းများအတွက် ထုပ်ပိုးကုန်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြု ကြသည်။ HDPE အမျိုးအစားကို နို့ဘူး၊ ရေဘူး၊ ဖျော် ရည်ဘူးအနောက်များ၊ ဆပ်ပြာမှုန့်ဘူးများ၊ ခေါင်းလျှော် ရည်ဘူးများ၊ အမှိုက်အိတ်များ စသည့်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ PVC အမျိုးအစားကို ကစားစရာပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စားသောက်ကုန် နှင့် အခြားကုန်ပစ္စည်းများ ထုပ်ပိုးရာတွင် အသုံးပြုရုံသာမက ညှစ်၍ သုံးရသော ခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးများ၊ ဆီဘူးများ အစရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြု သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၌လည်း ရေသွယ်ပိုက်လိုင်းများအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ PVC ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများသည် အန္တရာယ်အပေးနိုင်ဆုံးပစ္စည်းများအနက် တစ်ခုအပါ အဝင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
LDPE အမျိုးအစားကို ကုန်စုံဆိုင်သုံးအိတ်များ၊ ပေါင်မုန့်နှင့် အေးခဲအသားများ ထည့်သည့် အိတ်များ၊ လက်ဖြင့် ညှစ်၍ သုံးရသည်ဘူးအမျိုးအစားများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ ဏဏ အမျိုးအစားကို အချဉ် ရည်ဘူး၊ ဒိန်ချဉ်၊ ထောပတ်ဆီဘူး၊ အအေးသောက်ရာ တွင် သုံးသည့် ပိုက်တံများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် သုံးကြသည်။ PP အမျိုးအစားကို ဖော့ဘူးခွက်၊ ပုံစံခွက်နှင့် တစ်ခါသုံးပစ္စည်းအမျိုး မျိုး ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုကြ သည်။
လူတို့သည် ပလတ်စတစ်များ၏တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ရာ၌ ပင်လယ်ရေပြင်တွင် အကြီးမားဆုံး သော ပြဿနာများကို ဖန်တီးပေးမည့် ယင်း၏ကြာရှည်ခံမှုအပေါ် မူတည်ကာ သတ်မှတ်ကြကြောင်း American Plastics Council မှ Robkerbs ဆိုသူက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ သည်။
ပလတ်စတစ်အကျိုးအပဲ့အစအနများသည် မည်သို့သော အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မောင်းနှင် သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ကြီးမားလှသော သမုဒ္ဒရာရေပြင်၏ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုဖြင့် ပလတ်စတစ် ညစ်ညမ်းမှုကို နယ်စည်းမခြားဘဲ ဖြစ်ပေါ်စေလျက်ရှိပေသည်။
ပလတ်စတစ်သည် ယင်း၏မူလဂုဏ်သတ္တိတစ်ရပ်ဖြစ်သော ဖော့ဂုဏ်ကို အကြောင်းပြု၍ ခရီး တွင်ကျယ်စွာ သွားနိုင်သည်။ ဝင်ရိုးစွန်းဒေသမှ အီကွေတာအထိ ကျယ်ပြန့်သော ရေပြင်များတွင် ပလတ်စတစ်များကို နေရာအနှံ့ မြင်တွေ့ကြရသည်။
ပလတ်စတစ်တို့၏ ဖော့ဂုဏ်အားဖြင့် ခရီးတွင် ကျယ်ပုံ ဥပမာကောင်းတစ်ရပ် ရှိပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အတွင်းက တရုတ်ပြည်မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဆီယက်တဲလ်မြို့သို့ ရေကြောင်းခရီးဖြင့် တင်ပို့သော ကုန်သေတ္တာအလုံးနှစ်ဆယ်အပြည့်ရှိ ရော်ဘာဘဲရုပ်များမှာ လမ်းခုလပ်တွင် ဆုံးရှုံးခဲ့ရ သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ အချို့သော ဘဲရုပ်များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အလာစကာကမ်းရိုးတန်း ရေပြင်တွင် ၁၉၉၄ ခုနှစ်၌ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အချို့မှာ ၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ်တွင် အိုက်စ်လန်းကျွန်း ရေပြင်၌ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အရုပ်အောက်ခြေတွင် အမှတ်တံဆိပ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပါဘဲရုပ် များကို အာတိတ်၊ ပစိဖိတ်နှင့် အတ္တလန် တိတ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်များတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
နေရောင်ဖြင့် ဓာတ်ပြိုကွဲခြင်းနှင့် ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြင့် ဓာတ်ပြိုကွဲခြင်း
ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြင့် ဓာတ်ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းသည် သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်သော ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပြီး သက်ရှိ၊ သစ်ပင်နှင့် သဘာဝသယံဇာတအခြေပြုပစ္စည်း မှန်သမျှသည် ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြင့် ပြိုကွဲ ပျက်စီးကြသည်။ သဘာဝသယံဇာတတစ်ရပ်ဖြစ်သော ရေနံစိမ်းသည် ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြင့် ပြိုကွဲပျက်စီးသော် လည်း ယင်းမှတစ်ဆင့် လူတို့ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသည့် ပလတ်စတစ်ကဲ့သို့သော ရေနံဓာတုပစ္စည်းမှာ ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြင့် ပြိုကွဲခြင်း မရှိပေ။
သစ်ပင်၊ တိရစ္ဆာန်အသေကောင်၊ ကျောက်တုံး ကျောက်ဆောင်၊ သယံဇာတ စသည့် အော်ဂဲနစ် ပစ္စည်းများကို ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြင့် ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးပေးသော အင်ဇိုင်းများနှင့် အဏုဇီဝပိုးမွှားများက လူတို့ ဖန်တီးထားသော ပလတ်စတစ်၏ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံကို သိရှိခြင်းမရှိသဖြင့် ပလတ်စတစ်ကုန်ပစ္စည်း များသည် ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြင့် ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်း မရှိကြပေ။
သို့ရာတွင် ယင်းတို့သည် နေအလင်းရောင်တွင်မူ ပြိုကွဲပျက်စီးကြသည်။ ထိုသို့ ပြိုကွဲရာ၌လည်း နေရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့် သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်သို့ ပြိုကွဲရောက်ရှိ သွားစေခြင်းသာဖြစ်ပြီး အဆုံးတိုင်ပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိဘဲ ပိုလီမာအဆင့်ရှိ မော်လီကျူး ပမာဏအထိ ရောက်ရှိသွားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ အရွယ်အစားအားဖြင့် မည်မျှပင် သေးငယ် သွားသော်လည်း မူလဂုဏ်သတ္တိများ ပျက်ပြယ်မသွားခြင်းပင်။ ပင်လယ်ပြင်တွင် ရေလှိုင်းရိုက်ခတ်မှု၊ သဲနှင့်ပွတ်တိုက်မှု၊ Oxidation ခေါ် အောက်ဆီဂျင်နှင့် ဓာတ်ပြုမှုတို့ကြောင့်လည်း ပလတ်စတစ်တို့ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲထွက်မှုဖြစ်ပေါ်သည်။ ထိုဖြစ်စဉ်မှာ ပင်လယ်ပြင်အတွင်း၌ နှစ်ပေါင်း ၄၅၀ မှ ၁၀ဝ၀ ခန့်အထိ ကြာမြင့်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
ရေသူမမျက်ရည်ဟုလည်း တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည့် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲထွက်လာသော ပလတ်စတစ်စေ့များသည် သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်လောက် သည့်အရွယ်အစားအထိ သေးငယ်ကာ နေရာအနှံ့သို့ ရောက်ရှိနေသဖြင့် ယင်းတို့ကို ရှင်းလင်းပစ်ရန်မှာ မဖြစ်နိုင်လှပေ။ လေတိုက်ရာ အရပ်ဆီ သို့ မျောပါသွားလောက်အောင် ပေါ့ပါးချင်တိုင်း ပေါ့ပါးကာ ကမ္ဘာ့ရေပြင်အနှံ့ အဆီးအတားမရှိ အချိန် ပြည့်ရွေ့လျားနေကြ ပေသည်။
သို့ဖြစ်ရာ နေအလင်းရောင်အားဖြင့် ဓာတ်ပြိုကွဲမှုဖြစ်ခြင်းက ပလတ်စတစ်၏ ဘေးအန္တရာယ် ပေးနိုင်စွမ်း ကို ပို၍အားကောင်းလာစေသကဲ့သို့ ရှိသည်။ စွန့်ပစ် ပလတ်စတစ်တို့သည် တစ်စစီပြိုကွဲကာ အဏုကြည့် မှန်ပြောင်းဖြင့် ကြည့်မှသာ မြင်နိုင်သည့် အရွယ်အစားသို့ ရောက်ရှိသွားသည့်တိုင် ရေပြင် များ၊ ကမ်းခြေများ၊ ကမ်းရိုးတန်းများ၊ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်များကို ညစ်ညမ်းစေကာ ရေနေသတ္တဝါများနှင့် ပိုမွှားများ၏ အစားခံရခြင်းမှတစ်ဆင့် လူတို့၏အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ဇီဝဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွင်းသို့ တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက် အန္တရာယ်ပြုခြင်းကို မလွှဲမရှောင်သာနိုင်အောင် ဖြစ်လာ ရပေသည်။
ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်ထက်တွင် အစိတ်အစိတ်အမွှာမွှာ ပြိုကွဲနေသော ပလတ်စတစ်အမှုန် အမွှားများသည် ယင်းသို့ မျောပါနေသော ပင်လယ်ရေပြင်မှ အခြားသော ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစည်းကာ အစုအဝေးတစ်ရပ်ဖြစ်လာပြီး ယင်းတို့ မျောပါနေသည့် ရေပြင်မှ အန္တရာယ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများကို စုပ်ယူခြင်းအားဖြင့် ညစ်ညမ်းသော အဆိပ်သင့် ရေမြှုပ်များသဖွယ် ပြုမူလာ ကြသည်။
ရေကို စုပ်ယူခြင်း မပြုနိုင်သည့် PCB (Polychlorinated Biphenyls) နှင့် DDE (Dichlorodiphenyl Dichloro Ethylene) အစရှိသည့် ပျောက်ပျက်နိုင်ခဲ့သော ညစ်ညမ်းအော်ဂဲနစ် ဓာတုပစ္စည်းများ (Persistent Organic Pollutants-POPs) ကို စုပ်ယူသည်။ ယင်း POP တို့တွင် ပါရှိသော အဆိပ်အတောက်သည် ပင်လယ်ရေတွင်နေသည်ထက် ပလတ်စတစ်တွင်နေခြင်းက အဆိပ် ပြင်းအား အဆတစ်သန်းမျှ တိုးပွားသည်။
တစ်နည်းဆိုရသော် ရေမှ ပျံ့နှံ့လာသော POP များသည် ပလတ်စတစ်အမှုန်အမွှားတို့၏ မျက်နှာပြင်တွင် စုဝေးကာ အဆိပ်စွမ်းအားမြင့်တက်လာပြီး ပလတ်စတစ်သည်လည်း ကုန်းမြေတွင်ရှိစဉ် ထက် ပင်လယ်ရေပြင်တွင်ရှိခြင်းက အန္တရာယ်ပေးနိုင်စွမ်း ပိုမိုကြီးမားလာသည်ဟု ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပလတ်စတစ်သည် အပြည့်အဝပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းမရှိသော်လည်း ပျမ်းမျှအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း တစ်ရာမှ ငါးရာအတွင်း ပျက်စီးလေ့ရှိသည်။ Polyolethylene, Polypropylene အစရှိသည်တို့ ကဲ့သို့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Polyolefin အမျိုးအစားများမှာ တာရှည်ခံရန်အတွက် အခြားဓာတု ဗေဒပစ္စည်းများ ထပ်ဆောင်းထည့်ထားသဖြင့် ထို့ထက်မကပင် သက်တမ်းကြာမြင့်နိုင်ပေသည်။ ပလတ် စတစ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို မြေတွင် ဇီဝဖြစ်စဉ်အရ ပြိုကွဲပျက်စီးစေရန် ပုံစံထုတ်လုပ်တည် ဆောက် ထားသည့်တိုင် ယင်းတို့၏ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများက သဘာဝ၏တိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းထက် ပိုမိုမြင့်မား နေသဖြင့် သက်တမ်းနှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ရှိနိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
Marine Conservancy ခေါ် ပင်လယ်ရေပြင်ထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က ကမ်းရိုးတန်း ရေပြင်တွင် အများဆုံးမြင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့် ပလတ်စတစ်ကုန်ပစ္စည်းတို့၏ ခန့်မှန်းသက်တမ်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
ရေဝဲစီးကြောင်း(Gyre) ဆိုသည်မှာ ဗဟိုမှတ်တစ်ခုကို အခြေပြု၍ ဝဲလှည့်နေသော အရွယ် ပမာဏကြီးမားသည့် သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းရှိ ရေဝဲစီးကြောင်း တို့သည် နာရီလက်တံ လှည့်သည့်အတိုင်း ဝဲလှည့်ကာ ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်း ရှိ ရေဝဲစီးကြောင်းတို့သည် နာရီလက်တံလားရာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဝဲလှည့်သည်။ ရေဝဲစီးကြောင်းစုစုပေါင်းသည် သမုဒ္ဒရာအကျယ် အဝန်း၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ကမ္ဘာ့အကျယ်အဝန်း၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်၊ ရေဝဲ စီးကြောင်းအားလုံး သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအပိုင်းအစများကို ဝဲလှည့် သယ်ဆောင်စုဝေးပေး ကြသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဓိကအားဖြင့် အပူပိုင်းဒေသ၊ သမုဒ္ဒရာရေဝဲစီးကြောင်း ငါးခုရှိသည်။ ယင်း တို့မှာ တောင်နှင့်မြောက် ပစိဖိတ်အပူပိုင်းရေဝဲစီးကြောင်း၊ တောင်နှင့်မြောက် အတ္တလန်တိတ် အပူပိုင်း ရေဝဲစီးကြောင်း၊ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ အပူပိုင်းရေဝဲစီးကြောင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ရေဝဲစီးကြောင်းတို့၏ သဘာဝ အရ မြောက်ပစိဖိတ်ရေဝဲစီးကြောင်းတွင် တွေ့ရှိရသော Great Garbage Patch မျိုးကို အခြားသော ရေဝဲစီးကြောင်းများ တွင်လည်း တွေ့ရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
ရေဝဲစီးကြောင်းတစ်ခု၏ အရွယ်အစားကို တိုင်းတာရန် ခက်ခဲသော်လည်း မြောက်ပစိဖိတ် အပူပိုင်းရေဝဲစီးကြောင်းသည် အကြမ်းအားဖြင့် စတုရန်းမိုင်သန်းပေါင်း ခုနစ်သန်းမှ ကိုးသန်းမျှအထိ ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ စတုရန်းမိုင် သုံးသန်းခန့်ကျယ်ဝန်းသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ တစ်ဖက်တစ်စပ်တည်းသော မြေအကျယ်အဝန်း(အလာစကာပြည်နယ်နှင့် ဟာဝိုင်ဟီကျွန်းတို့ မပါဝင်ပါ) ထက်၊ သုံးဆခန့်ကျယ်ဝန်းသည်ဟု အကြမ်းအားဖြင့် ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
မြောက်ပစိဖိတ်အပူပိုင်းရေဝဲစီးကြောင်းရှိ Great Garbage Patch သည် အရှေ့ခြမ်းနှင့် အနောက်ခြမ်းရှိ သီးခြားစီဖြစ်သော ဒိုက်ပုံနှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုဒိုက်ပုံနှစ်ခုမှာ မိုင်ပေါင်းခြောက်ထောင်မျှ ကွာဝေးကာ North Pacific Convergence Zone ခေါ် စင်္ကြံလမ်းကြောင်း ဖြင့် သွယ်တန်းဆက်သွယ်ထားသည်။ အဆိုပါစင်္ကြံလမ်းကြောင်းကိုယ်နှိုက်ပင်လျှင် ပင်လယ်ရေပြင် မျောပါသွားလာနေကြသော ပလတ်စတစ်အကျိုး အပဲ့အစအနများစုဝေးရာဇုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အရှေ့ဘက်ခြမ်းပစိဖိတ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဒိုက်ပုံ (Eastern Pacific Garbage Patch) သည် ဂျပန်နှင့် ဟာဝိုင်ယီ အကြားတွင်ရှိပြီး အနောက်ဘက်ခြမ်းပစိဖိတ်စွန့်ပစ် ပစ္စည်းဒိုက်ပုံ (Western Pcific Garbage Patch) သည် ဟာဝိုင်ယီနှင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားအကြားတွင် တည်ရှိသည်။ မြောက် ပစိဖိတ်ရေဝဲစီးကြောင်း၏ လှည့်ပတ်မှုပုံစံအရ အာရှဒေသမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုပင် အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုရေပြင်ဆီသို့ သယ်ဆောင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဒိုက်ပုံဟု အမည်ပေးထားသည့်အတွက် ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျိုးစုံတို့၏ အစုအဝေးများကို အလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်မည်ဟု လူအများက ထင်မှတ်ကြသော်လည်း စင်စစ်တွင် ယင်းတို့၏ ထင်မြင်ချက်မှာ ရာနှုန်းပြည့်မှန်ကန်ခြင်း မရှိပေ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဒိုက်ပုံရှိရာ ရေပြင်ပေါ်တွင် ကြီးမားသော ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို အလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်သော်လည်း ယင်း ဒိုက်ပုံတို့၏ ကြီးမားလှသော အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ ရေတွင်ပေါ်နိုင်သော ပလတ်စတစ်စေ့ငယ်များသာ ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့သည် သာမန်မျက်စေ့ဖြင့် မမြင်တွေ့နိုင်လောက်အောင် အရွယ်အစားသေးငယ်ရုံ သာမက ရေမျက်နှာပြင်အထက်တွင် ရှိနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ တစ်ဆယ်မီတာ ခန့်အနက်အတွင်း စုဖွဲ့တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုတေသနရလဒ်များအရ သိရှိရသည်။
ပင်လယ်ရေပြင်အတွင်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအနက် အရွယ်အစားအကြီးဆုံးအဖြစ် တွေ့ရှိရသော ပစ္စည်းမှာ စွန့်ပစ်ငါးဖမ်းပိုက်များဖြစ်ပြီး မိုင်ထောင်ချီ၍ ရှည်လျား တတ်ကြသည်။ တစ္ဆေပိုက်များဟု လည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ စွန့်ပစ်ငါးဖမ်းပိုက်များကြောင့် ပင်လယ်ဖျံ၊ လင်းပိုင်၊ ပင်လယ်လိပ်၊ ငါးမန်း၊ ရေဝက်၊ မိကျောင်း၊ ပင်လယ်ပျော်ငှက်၊ ဂဏန်းနှင့်အခြားသော ရေနေသတ္တဝါတို့၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်လျက်ရှိသည်။ ပိုက်ကွန်အတွင်း ငြိမိရာမှ ရုန်းထွက်မရဘဲ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှု မပြုနိုင်ခြင်း စသည်တို့အပြင် ရေမျက်နှာပြင်အထက်သို့ လေရှုရန် တက်ရောက်ရသည့် ရေနေသတ္တဝါ တို့မှာလည်း အသက် ရှုကြပ်ခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်။
အဆိပ်သင့်နေသော ပလတ်စတစ်စေ့များကို အစာအမှတ်ဖြင့် စားသောက်မိခြင်းအားဖြင့်လည်း ဝေလငါး၊ ပင်လယ်ဖျံစသည့် ရေနေသတ္တဝါများမှသည် အဏုဇီဝပိုးမွှားများသာမက ကမ်းခြေတွင်နေထိုင် သော ငှက်များသည်ပင် အသက်သေဆုံးကြရသည်။ သုတေသနရလဒ်များအရ အနည်းဆုံးသက်ရှိမျိုး စိတ်ပေါင်း ၂၆၇ မျိုးမှာ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်း၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားနေရပြီး၊ ရေနေသတ္တဝါတစ်သိန်းခန့် နှင့် သန်းချီသော ငါးနှင့်ငှက်တို့မှာလည်း နှစ်စဉ်သေဆုံး နေကြရကြောင်း သိရှိရသည်။
ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ပြိုကွဲပျက်စီးသည့် ပလတ်စတစ်တို့သည် အနာဂတ်ကမ္ဘာကို ညစ်ညမ်းစေ မည့် ခြိမ်းခြောက်မှု အသစ်တစ်ရပ်ဖြစ်လာနေကြောင်း သုတေသနပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Katsushiko Saido က ပြောကြားခဲ့သည်။ ရေနေသတ္တဝါတို့ကို အသက် အန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်းမှသည် လူတို့၏ အစား အသောက်ဆိုင်ရာ ဆင့်ကဲဇီဝဖြစ်စဉ် (Food Chain) အပေါ်တွင်လည်း ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်နိုင်ချေကို လေ့လာဆန်းစစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Saido ၏ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအရ ရေပြင်တွင် ပြိုကွဲပျက်စီးသော Polystyrene ပလတ်စတစ်တို့က Bispherol A (BPA) ခေါ် ဓာတုပစ္စည်းများကို ထုတ်လွှတ်သည်။ BPA သည် ရေနေသတ္တဝါတို့၏ မျိုးပွားစနစ်ကို ထိခိုက်စေသည့်အပြင် အဆိပ်အတောက်လည်းဖြစ်စေသည်။ အစား အစာမှ စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသော Metabolism စနစ်ကိုလည်း ထိခိုက်စေသည်။ Polystyrence ပလတ်စတစ်၏ မိုနိုမာသည် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သော ဓာတ်ပစ္စည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
ထို့အပြင် ပင်လယ်ကမ်းခြေများ ကမ်ရိုးတန်းများ၊ ပင်လယ်ကြမ်းခင်းများတို့သည်လည်း ပလတ် စတစ်စွန့် ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်သည့်အပြင် ပင်လယ်ရေပြင်၏ ဂေဟစနစ်အပြောင်း အလဲဖြစ်ခြင်း၊ သန္တာကျောက်ဆောင်များပျက်စီးခြင်း အစရှိသည့်များစွာသော ဆိုးကျိုးတို့လည်း သက်ရောက်လျက်ရှိသည်။
ထိုမျှအန္တရာယ်များပြားလှသော စွန့်ပစ်ပလတ် စတစ်ပစ္စည်းများကို ပင်လယ်ရေပြင်အတွင်းသို့ အများဆုံးစွန့်ပစ်နေသည့် နိုင်ငံပေါင်းနှစ်ဆယ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ၌ အာရှနိုင်ငံအများစုက ထိပ်ဆုံးမှ ပါဝင်လာသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ အာရှငါးနိုင်ငံမှ ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းမပြုနိုင်ဘဲ ပင်လယ်ရေပြင် အတွင်းသို့ စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည့် ပလတ်စတစ်တန်ချိန်အရေအတွက်မှာ အခြားနိုင်ငံများ၏ စုစုပေါင်း စွန့်ပစ်မှုထက်ပင် ပိုမိုများ ပြားနေပေသေးသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော နိုင်ငံအလိုက် စွန့်ပစ်မှုစာရင်းကို ဇယား(၁)တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
သုတေသနစစ်တမ်းများအရ ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ရေပြင်သို့ ရောက်ရှိလျက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ် ပစ္စည်းများ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၊ မြစ်ကြီး ဆယ်စင်းဆီမှ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ သိရှိလာကြပြီး ထိုမြစ်ကြီးဆယ်စင်းအနက် ရှစ်စင်းမှာ အာရှနိုင်ငံများ မှဖြစ်သော တရုတ်နိုင်ငံမှ ယန်စီမြစ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဂင်္ဂါမြစ်၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံမှ ဘရန်တတ်စ်မြစ်တို့ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
အာရှနိုင်ငံများ၏ ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှု တားဆီးရေးဆောင်ရွက်ချက်များ
ပင်လယ်ပြင်အတွင်း မလိုလားအပ်သော စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် အာရှနိုင်ငံများစွာတို့က ပလတ်စတစ်အိတ်သုံးစွဲမှု ပိတ်ပင်ခြင်း၊ အကန့်အသတ်ပြုခြင်းများဖြင့် ဆောင် ရွက်လာနေ ကြပြီဖြစ်သည်။
ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်မှု ထိပ်တန်းနိုင်ငံနှစ်ဆယ်တွင် ပါဝင်သော အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့အပါအဝင် ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ် အစရှိသော နိုင်ငံများတွင် ပလတ် စတစ်အိတ်သုံးစွဲမှု ထိန်းချုပ်ရေးတားဆီးပိတ်ပင်ရေးများကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အသိ ပညာပေးလှုံ့ ဆော်ခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း HDPF အမျိုးအစား ပလတ်စတစ်အိတ်ပါးများ ထုတ်လုပ်သုံးစွဲခြင်းကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပြီး ပျောက်ပျက်နိုင်ခဲသော ညစ်ညမ်းအော်ဂဲနစ် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ (POPS) ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည့် Stock-holm Convention တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးအား တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ချောက်လှန့် လျက်ရှိသော Persistent Organic Pollutants (POP) ခေါ် ပျောက်ပျက်နိုင်ခဲသော ညစ်ညမ်း အော်ဂဲနစ်ဓာတုပစ္စည်းများ၏ ဘေးရန်မှ ကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စတော့ ဟုမ်းကွန်ဗင်းရှင်းကို ၂၀ဝ၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၂ ရက်နေ့ တွင် ဆွီဒင်နိုင်ငံ စတော့ဟုမ်းမြို့၌ အတည်ပြုချမှတ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်နေ့တွင် စတော့ဟုမ်းကွန်ဗင်းရှင်းအား ပါဝင်လက် မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် စတော့ဟုမ်း ကွန်ဗင်းရှင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေင်း ၁၈၀ ကျော်ရှိသည်။
ထိုကွန်ဗင်းရှင်းက သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားသော POP အမျိုးအစား ၂၈ မျိုးတွင် ပိုးသတ်ဆေး များနှင့် လုပ်ငန်းသုံးဓာတုဗေပစ္စည်းများ အဓိကပါဝင်သည်။ ထို POP များကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း မပြုရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းပပျောက်သွား စေရန် လမ်းညွှန်ချက်များချမှတ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ POP ၂၈ မျိုးသည် အဆိပ်အပြင်းစားများ ဖြစ်သည့်အပြင် ပြိုကွဲပျက်စီးရန် မလွယ်ကူသော၊ တာရှည်ခံဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်ခြင်း၊ အဆီတွင်ပျော်ဝင်လွယ်ခြင်း၊ ရေစီးကြောင်းနှင့် လေတိုက်ခတ်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် မိုင်ပေါင်းများစွာသို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိနိုင်စွမ်းရှိခြင်းစသော ဂုဏ်သတ္တိများရှိ ကြသည်။ ကင်ဆာရောဂါ အပါအဝင် ရောဂါကြီးအမျိုးမျိုးကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေ နိုင်သည်။
ရေစီးကြောင်းသယ်ဆောင်ရာသို့ပါသွားသော POP များသည် ပလတ်စတစ်စေ့များ၏ စုပ်ယူမှု ဖြင့် အဆိပ်ပြင်းအား အဆမတန်ပွားများကာ ရေနေသတ္တဝါတို့အပေါ် အသက်အန္တရာယ်ကြီးစွာ ကျရောက်စေနိုင်ပေသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပင်လယ် ရေပြင်သို့ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်မှု အများဆုံးနိုင်ငံ ၂၀ အနက်အဆင့် ၁၇ တွင် ဖော်ပြထားခြင်းခံရသော မြန်မာနိုင်ငံ၌လည်း ပလတ်စတစ် သုံးစွဲမှုလျော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော သန့် မြန်မာအဖွဲ့က ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုအကြောင်း အသိပညာပေးခြင်း၊ ပလတ်စတစ်ရေဘူးများသုံးစွဲမှု လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် ရေချမ်းစင်များ တည် ဆောက်ပေးခြင်း အစရှိသည့် လှုပ်ရှားမှုများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လာနေပြီဖြစ်သည်။
လက်ရှိခန့်မှန်းချက်များရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွန့်ပစ် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုမှာ ပြီးခဲ့သည့် ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း သုံးဆမျှမြင့်တက်လာကာ မြန်မာ့ရေစီးကြောင်းများအတွင်းသို့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း များ နေ့စဉ် ဝင်ရောက်မှုမှာ တန်ချိန် ၂၀ဝ ခန့်အထိ ရှိနေပြီဖြစ် ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုလျှော့ချရေး အကြံပြုချက် အများအပြားရှိသည့်အနက် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်လျော ညီထွေရှိသော အချက်အလက်အချို့ကို အောက်ပါ အတိုင်း ရွေးချယ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၁။ အအေးသောက်ရာတွင် ပလတ်စတစ်ပိုက် (Starw)များကို အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၂။ တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်အိတ်များကို အသုံးမပြုပါ နှင့်။
၃။ ပီကေခေါ် Chewing Gum စားသုံးခြင်းမပြုပါနှင့်။
၄။ ပလတ်စတစ်ပုလင်းများအစား ကတ်ထူဘူးများဖြင့် ထုပ်ပိုးသော ကုန်ပစ္စည်းကို ပြောင်းလဲ ဝယ်ယူပါ။
၅။ စားသောက်ဖွယ်ရာဝယ်ယူရာ၌ ဖော့ဘူး၊ ဖော့ခွက် နှင့် ပလတ်စတစ်အိတ်အစားချိုင့်၊ ခွက်များ ပြောင်းလဲသုံးစွဲပါ။
၆။ ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ဂက်စ် မီးခြစ်အစား သစ်သားမီးခြစ်ကို သုံးစွဲပါ။
၇။ ပလတ်စတစ်ပတ်ထားသော အေးခဲသားများကို ဝယ်ယူခြင်းမပြုပါနှင့်။
၈။ အိမ်တွင် ပလတ်စတစ်ခွက်ယောက်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲခြင်းမှရှောင်ရှားပါ။
၉။ သစ်သီးများကို ကိုယ်တိုင်ဖျော်သောက်ခြင်းဖြင့် ပလတ်စတစ်ဘူး အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။
၁၀။ ထမင်းဘူးကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ချိုင့်၊ ခွက်တို့ဖြင့်သာ အသုံးပြုပါ။
၁၁။ တစ်ခါသုံး မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များကို မသုံးပါနှင့်။
တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများသည် အမြင်တွင် မကြီးကျယ်သော်လည်း များပြားလှသော နေ့စဉ်စွန့်ပစ်မှုက ကမ္ဘာကြီးအား ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသော ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကို ကြီးစွာအထောက်အကူပြုနေသော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ယင်းတို့နှင့် ပတ်သက်သော သိမှတ်ဖွယ်ရာ အချို့ကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၁။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာ မက်ထရစ်တန်ချိန် ၃၃၅ သန်း အထိရောက်ရှိခဲ့သည့်အနက် ထက်ဝက်ခန့်မှာ တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂။ လူတို့သည် တစ်မိနစ်လျှင် ပလတ်စတစ်ဘူးပေါင်းတစ်သန်းမျှ ဝယ်ယူသုံးစွဲနေကြပြီး ယင်းတို့ အနက် ၂၃ %ခန့်သာ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှု (Recyle) ရှိသည်။
၃။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင် နှစ်စဉ်ပလတ်စတစ်အိတ်လေးထရီလီယံ (သန်းပေါင်းလေးသန်း)မျှရှိပြီး ယင်းတို့အနက် ၁ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှုရှိသည်။
၄။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး၌ အအေးပိုက် (Straw) သုံးစွဲမှု မှာ တစ်ရက်လျှင် ငါးသိန်းခန့်ရှိသည်။
၅။ တစ်ခါသုံးဖော့ခွက်သုံးစွဲမှုမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၅၀ဝ ဘီလျံမျှရှိသည်။ အဆိုပါဖော့ခွက်များသည် ပြန် လည်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲခြင်း၊ လုံးဝပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ မြေဖို့ရာတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သော ဖော့ခွက်များသည် နှစ်ပေါင်း ၅၀ဝ မျှအထိ မပျက်မစီးတည်ရှိနိုင်သည်။
၆။ ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လာသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ပလတ်စတစ်ကို ထုပ်ပိုး ကုန်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးတွင်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း ဖိုင်ဘာ မဟုတ် သော ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှု၏ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပလတ်စတစ်ထုပ်ပိုးကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သာဖြစ်သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခုအခါ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။
၇။ ပလတ်စတစ်ထုပ်ပိုးကုန်အဖြစ် အသုံးပြုရန် နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ ၇၈ သန်းအနက် ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအဖြစ် ရောက်ရှိသည်။ ဤသည်မှာ ပင်လယ်အတွင်းသို့ တစ်မိနစ်လျှင် ထရပ်ကားတစ်စီးစာ စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။ အဆိုပါနှုန်း ထားသည် ၂၀၃၀ ပြည့် နှစ်တွင် နှစ်ဆမြင့်တက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၅၀ ပြည့် နှစ်တွင် လေးဆအထိ မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းရသည်။ ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပင်လယ်ရေပြင်၌ ငါးအရေအတွက်ထက် ပလတ်စတစ်ကပိုမိုများပြားနေမည်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
၈။ တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကြောင့် ဖြစ်ပွားသော ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်နိုင် ရေးအတွက် အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းမှာ လူတစ်ဦးချင်း၏ ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှု လျှော့ချ ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ပလတ်စတစ်၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာ လူတို့ထင်မှတ်ထားသည်ထက်များစွာ ကြီးမားနေ ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြရပြီး ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ရေပြင်ထက်မှ မိုင်ထောင်ချီရှည်လျားသော စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ် ဒိုက်ပုံကြီးများက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီမှ ခေါင်းဆောင်များကိုပင် အံ့အား အသင့်ကြီးသင့်စေခဲ့ပြီဖြစ် သည်။
ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း တိုးပွားလာနေသည့် ပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်လာနေကာ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပြည်သူလူထုတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖြေရှင်းကြရမည့် ပြဿနာ တစ်ရပ်လည်းဖြစ်သည်။
နောင်လာမည့် မျိုးဆက်သစ်အတွက် ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်သော ကမ္ဘာမြေချန်ထား နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့သည်လည်း ကမ္ဘာ့လူထုနှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြရန် ယနေ့ ပင်စတင် ဆောင်ရွက်လိုက်ကြပါစို့ဟု တိုက်တွန်းရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းအချို့ကို မြန်မာစာဖြင့် ရေးသားဖော်ပြရာ၌ သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်နယ်ပယ်မှ တရားဝင်အသုံးအနှုန်းများကို ရှာဖွေရန် လက်လှမ်းမမီသဖြင့် ဆောင်းပါးရေးသားသူ၏ အာဘော်ဖြင့်သာ ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထား ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်နယ်ပယ်မှ တရားဝင်အသုံးအနှုန်းများနှင့် ဝေါဟာရအားဖြင့် ကွဲလွဲ ကောင်း ကွဲလွဲနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း အဓိပ္ပာယ်အနှစ်သာရအားဖြင့် ကွဲလွဲမှုမရှိနိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။)
Reference: 1) When the Mermaids Cry: The Great Plastic Tide by Claire Le Guern, Last Update in March 2018.
2) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေပြီး ကြာရှည်စွာမပျောက်မပျက် တည်မြဲနေနိုင်သည့် (Persistent Organic Pollutants -POPs)အကြောင်း သိကောင်းစရာ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ Facebook Post ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်။
3) Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Wikipedia)
4) Thant Myanmar: Grassroots Movement Fighting Against Plastic Pollution Myanmar internationaltv.com, May 31, 2018
5) Five Asian Countries Dump More Plastic into Oceans Than Anyone Else Combined; How You Can Help, Forbes Magazine, April 21,2018
6) Shocking Report reveals that 95% of Plastic Polluting the World’s Oceans Comes from just TEN Rivers including the Ganges and Niger by Shivali Best for Mailonline,11 October 2017.
7) Top 20 Countries Ranked by Mass of Mismanged Plastic Waste by Earth Day 2018, END PLASTIC POLLUTION
8) How Are Asian Countries Tackling Plastic Pollution? by Lainey Loh, Mar 30, 2018 ,Asian Correspondent
9) Fact Sheet: Single Use Plastics by Earth Network, Earth Day 2018, ENDPLASTIC POLLUTION
10) Scientists estimate total weight of Plastic floating in world’s Oceans: Nearly 269,000 tons of plastic pollution floating in the oceanby Science Daily, December 2014.
Posted by Alex Aung at 4:56 AM No comments:
ကျားမရေးရာအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု အကြောင်း သိကောင်းစရာ
အုန်းနို့သာကူပြင် - လက် စမိုင် - ပိန်းဥအော်ကွေ့ကြည်